That's so good, right?: May 2016
Posted by Alex Aung at 4:49 PM No comments:
ကျနော် နှစ်လိုလက်ရ ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောမိခဲ့ပါတယ်။ ကောင်းပါပြီ ကျနော်ဘာကြောင့်သူနဲ့ ချစ်ပွဲမ၀င်နိုင်ရမှာလဲ။ သူ့မျက်နှာ လေးအား ကျနော့်ဆီ ဆွဲကပ်ယူလိုက်ရင်း အနမ်းတစ်ပွင့်တပ်မက်စွာပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါဟာ သူ့အတွက် အဖြေတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြသ ရာရောက်တဲ့အတွက် သူ ကျနော်ဝတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီတွေကို စတင်ချွတ်ပြုပါရော။ နောက်ဆုံးတော့ သနားစရာ ကျနော့်ညီဘွားဟာ လေထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကို ဖြစ်သွားတယ်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲကနေ ခေါင်းပြူထွက်လာတဲ့ ကျနော့်ငပဲခေါင်းကို သူ ထူးထူးခြားခြား သတိပြုမိဟန်တူပါတယ်။
သူ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ငပဲခေါင်းလေးကို အသာဖိလိုက်ဖော့လိုက်ဖျစ်ညှစ် ကိုင်တွယ် ပါတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ ပွေ့ချီထားတဲ့ ကျနော့်ကို အိပ်ရာပေါ်ကို အသာချလှဲလှောင်းစေပြီး သူ့ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့ အပေါ်က အုပ်မိုးထားကာ ကြက်သီးအနည်းငယ်ထနေသော ကျနော့်ရင်အုပ်တွေကို အနမ်းပေးတယ်၊ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို အသာတို့ထိတယ်၊ ပြီးတော့ သူ့လျှာဖျားလေးကို ခံတွင်းကနေထုတ်ကာ မာတောင့်လာသည်အထိ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကလိပါတော့ တယ်။ ကျနော့် ရင်အုပ်အနှံ့ သူ့လျာနဲ့လျက်တယ်….ဆက်ပြီး ဆက်ပြီး….အာ….ကျနော့် abs အနှံ့ စမ်းသပ်ရှာဖွေမှုလုပ်ပါတယ်။
ကုန်လွန်ခဲ့ပြီးသော ခြောက်လလောက်က ကျနော့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်အတွက် အပြင်းအထန်ကြိုးစားဖြတ်သန်းခဲ့တာကိုသတိရမိပါတယ်။ မှန်ပေါ်မှာထင်သော ကိုယ်ခန္ဓာကောက်ကြောင်းကို သတိပြုမိသောနေ့ရက်ကအစပြုပြီး သူတစ်ပါး မစနောက်ခင် ကိုယ့်ဖာသာပြုပြင် ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ တနင်္လာကနေ သောကြ်ာနေ့ထိ ကြားရက်များမှာတော့ တစ်ရက်ကို နှစ်နာရီနီးပါး ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပြု လုပ်တယ်၊ Whey Protein မှီဝဲတယ်၊ မနက်ခင်းစောစောတိုင်း ခပ်ရွရွပြေးတယ်၊ Diet Plan လုပ်တယ်လည်းမဟုတ် အများအပြား လည်းမစား ဘာကို ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာ အတိအကျသတ်မှတ်ပြီး စားသုံးမှီဝဲပါတယ်။ကျနော့် ဘော်ဒါတွေအကုန် မစမနောက် ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြစ်တဲ့အထိပါပဲလေ။
အရူးအမူး ကစားခြင်းရဲ့အကျိုးရလဒ်ကတော့ ပိုက်ဆံကုန်ရတာ အချိန်ပေးရတာနဲ့တန်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းမှာ ရှိသော ကြွက်သားဆိုင်များ abs တွေတင်းရင်းကျစ်လစ်နေကာ six-pack များဟာလည်း ထင်းနေတာပါပဲ။ အခုဆိုရင်တော့ မနက်ခင်း တိုင်း မနှေးမမြန်ပြေးတဲ့ လေ့ကျင့်မှုဟာ အတော်အသားကျနေခဲ့ပါပြီ။ အား… လင်းမောင်အပေါ် အာရုံပြန်ကပ်မိတဲ့ခဏ သူက အကျ င်္ီ
တွေချွတ်ပြုနေပြီလေ။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားကလည်း သူ့မျက်နှာလိုပဲ ဆွဲဆောင်မှုပြင်းထန်လွန်းလှပါတယ်။
သူ့ကြည့်ရတာ အားအင်သုံးပြီးကစားရတဲ့ အားကစားတစ်မျိုးမျိုးကို သိသိသာသာကစားပုံပါပဲ။ သန်မာတဲ့ သူ့ပခုံးကြွက်သားတွေက တကယ့်ကို အမြှောင်းလိုက်၊ တကိုယ်လုံးမှာလည်း ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့နေရာမှာ အဖုဖုအထစ်ထစ်နဲ့ကြွက်သားဆိုင်တွေ၊ ဗိုက်သားပြင်က six-pack ကလည်း ကျနော့်ထက်တောင်ပြတ်သားထင်းရှားနေသေးတယ်။ အဆီပိုမရှိတဲ့ ခပ်သွယ်သွယ်သူ့ခါးကလည်း v-shape တစ်ခု အသွင် ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူဝတ်ထားသော boxer ဘောင်းဘီရဲ့နောက်ကွယ်ကအကြောင်းအရာကိုတော့ ကျနော် မခန့်မှန်း နိုင်ပြောပြနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။
ကျနော် သူ့ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်စဟူသမျှကို ခပ်မြန်မြန်ပဲ ဖယ်ရှားပစ်တယ်။ စောင့်ဆိုင်းဖို့အချိန်လုံးဝမရှိဘူးလေ။ သူ့ဦးခေါင်းနောက်က ဆံနွယ်တွေကို လက်နဲ့အသာထိုးဖွကိုယ်တွယ်လိုက်ရင်း အနမ်းတစ်ချက်ပေးလိုက်ချိန်မှာတော့ ကြည့်ရတာ တစ်ခုခုကို စိုးရိမ်စိတ်ဝင်နေ သလိုဖြစ်နေတယ်။ ဒီတော့ သူ့ကို အိပ်ရာပေါ်ကို ပက်လက်ဖြစ်အောင် တွန်းပြုလဲလျောင်းစေလိုက်တယ်။ ရူးနှမ်းနေတဲ့ လူတစ်ယောက် လိုပဲ ကျနော် သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ boxer ဘောင်းဘီတိုကို ဆွဲချွတ်ကာ ပေါ်လာတဲ့ သူ့ကိုယ်အင်္ဂါအပိုင်း အစတွေကို မျက်တောင်မခတ် ငမ်းမိပါတယ်။
၀ိုး……၇ လက်မ၀န်းကျင်ရှိမယ့် ထိပ်အရေပြားမဖြတ်ထားသော လိင်အင်္ဂါတစ်ခု။ ပြီးတော့ တဖြည်းဖြည်းရှည်လျားထွားကြိုင်းလာတဲ့ အနေအထားက မရပ်သေးပါဘူး။ လင်းမောင်က ကျနော့်ကို သူ့ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းလိုက်ကာ သူ့ကိုစိတ်လိုလက်ရ အနမ်းပေးစေပါတယ်။ ရှည်လျားထွေပြားတဲ့ သူ့လျှာကြီး ကျနော့်အာခံတွင်းအနှံ့လျှောက်သွားနေတာကို ကျနော်ခွင့်ပြုမိပြန်တော့ ခပ်နွေးနွေးအထိအတွေ့ရယ် သူ့အာခံတွင်းက သွားရည်တွေရဲ့အရသာရယ်ကို ရရှိခံစားရပြန်ရော။ ကျနော့်လက်အစုံကတော့ သူ့ရင်အုပ်နေရာအနှံ့ရယ် နုညံ့ချော မွတ်သော ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို ပွတ်သပ်တယ်လေ။ သူ့ငပဲခပ်ထွားထွားကို ခပ်တင်းတင်းလေးညှစ်ကိုင်လိုက်ပြန်တော့ သူ့ ပါးစပ်က ညည်းညူသံအချို့ညည်းတွားလိုက်ရင်း အပိုဆုအဖြစ် သူ့ငပဲခေါင်းကနေ အရည်ကြည်အချို့ ကျနော့်လက်ထဲကို စိုစွတ် စေပါတယ်။ ကျနော့်ပါးစပ်ထဲ အာခံတွင်းထဲ ဒါကြီးကိုမထည့်ခင် အရည်ကြည်တွေကို လက်နဲ့သုပ်သင် သန့်ရှင်းလိုက်တယ်။
ကျနော် ဘယ်တုန်းကမှ အခြားသူရဲ့ လိင်အင်္ဂါကို ပါးစပ်နဲ့သာယာမှုမပေးဖူးပါဘူး။ အခု..ကြည့်ဦး ပျော့ပြောင်းနေချိန်ကနဲ့မတူ မျက်လုံး ပြူးစရာ monster ကြီးက ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့လေ။ တံတွေးတွေကို ဂလုကနဲမြည်အောင်မျိုချမိပါရဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ကိုယ်လုပ်နိုင် သလောက် ကြိုးစားကြည့်ဖို့ သာယာမှုပေးစွမ်းနိုင်ဖို့ ကျနော် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ပါးစပ်လေးကိုအသာဟာ သူ့တင်ပါးဆုံကိုလက်နဲ့ ထိမ်းကိုင်ဆွဲယူကာ သူ့ငပဲကြီးကို လည်မျိုထဲထိတိုင်သွင်းယူလိုက်ပါတယ်။ ကျနော့်အာခံတွင်းက အတွင်းပိုင်းသားတွေနဲ့ သူ့ငပဲထိ တွေ့ချိန်မှာတော့ လင်းမောင်ရဲ့နှုတ်ဖျားက ကျေနပ်မှုနဲ့အတူအော်ဟစ်ညည်းညူသံထွက်လာတယ်ဗျ။
ကျနော့်လည်မျိုထဲထိ သူ့ငပဲကိုခပ်ဖြည်းဖြည်းစတင်ဖိသွင်းလာတဲ့ အချိန်မှာ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်နေဖို့ အော့အံတာမျိုးမဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်ဖာသာပဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ မျက်လုံးများကို မှေးမှိတ်ကာ ကျနော့်မျက်နှာကိုရိုက်ခတ်ထိတွေ့လာသော အထိအတွေ့နဲ့ အ၀င် အထွက်ဖြစ်နေမှုတို့ကို သည်းခံဖို့ကြိုးစားဖြစ်တယ်လေ။ ပထမဦးဆုံး အတွေ့အကြုံမှာပဲ တစ်ဖက်သား ကသိကအောင့်မဖြစ် အောင်လုပ် နိုင်လို့ ကိုယ့်ဖာသာလည်း ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ လေရှူရှိုက်ချိန်ရသောအခိုက်အတန့်တိုင်းမှာတော့ သူ့ငပဲခေါင်းရဲ့အောက်ဖက် မေးသိုင်း ကြိုးကို လျှာနဲ့လျက်ပြုတယ်လေ လည်မျိုထဲထိငပဲကြီးဝင်သွားချိန်ဆို မလုပ်နိုင်ဘူးမဟုတ်လား။ သူ့ငပဲဆိုဒ်ကိုသူရိပ်မိတာ ကြောင့် အရမ်းကာရောမလုပ်ဘဲ သူ့ငပဲကို တစ်ချက်ခြင်း ကျနော့်အာခံတွင်းထဲကို မနှေးမမြန်ဖိဖိသွင်းပါတယ်။
"Please, please justabit more".
သူ့မျက်နှာပုံဟန်ကတကယ့်ကို လှပတဲ့ပန်းချီကားတစ်ချပ်ပါပဲ။ မထူမပါး သူ့အောက်နှုတ်ခမ်းကို မှေးကိုက်ရင်း မျက်ဝန်းများကိုတော့ တင်းကြပ်စွာမှေးမှိတ်ထားတာလေ။ ချွေးစေးကြောင်း သေးသေးလေးတွေက သူ့လည်တိုင်ကနေ တစ်ဆင့် သူ့ကြွက်သားမြှောင်းတွေ ကြားစီးကျနေကြတယ်။ သူ့ငပဲကို အသာဆွဲထုတ်ကာ အသက်လုရှူနေဟန်အနေအထားငြိမ်နေတဲ့ အတွက် ကျနော် သူ့ငပဲကိုငုံ့ကိုင်း ကာ ပါးစပ်ထဲစုပ်မျိုလိုက်ပြီး ဦးခေါင်းကိုတလှုပ်လှုပ်ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုပြန်တော့သူက ကျနော့်ဦးခေါင်းကို သူ့လက်နှစ်ဖက် နဲ့ထိန်းကိုင်ပြီးနောက် ငပဲကြီးကို ပါးစပ်ထဲအထုတ်အသွင်း စလုပ်ပါတော့တယ်။ တစ်ချက်တစ်ချက် ဆောင့်ဆောင့်သွင်းလိုက်တိုင်း သူ့ ငပဲဟာ ကျနော့်လည်မျိုထဲ ပိုပိုတိုးဝင်လာတာများ ငိုလောက်အောင်ခံစားရပေမယ့် နည်းနည်းတော့ အားရကျေနပ်မိသလိုပါပဲ။
သူဇာတ်သိမ်းခန်းဆိုက်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာ ကျနော့်အာရုံရပါရဲ့။ သူ့ငပဲရဲ့သွေးကြောများဟာ ပါးစပ်ထဲဝယ်ပိုပိုဖောင်းကားလာသလို အရည်ကြည်အတော်များများဟာလည်း စိမ့်ထွက်စပြုလာပြီကိုး။ ကျနော့်ဦးခေါင်းကို အသာနောက်ဆုတ်ပြီး ယိမ်းတိမ်းလိုက်မိချိန်ဝယ် သူကလည်း ကိုယ်လုံးကြီးကို အနည်းငယ်နောက်ဆုတ်လိုက်ပြီး ကျနော့်ကို မွေ့ယာထဲဆွဲလှဲကာ နှုတ်ခမ်းတွေကို အားရပါးရအနမ်းပေးဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။ ငန်ကျိကျိ သူ့ကိုယ်ပိုင်အရည်ကြည်တွေကို ပြန်အရသာခံကြည့်ချင်မိလို့ထင်ပါရဲ့လေ။ တက်မက်မှုရဲ့အလွန်ကြမ်း တမ်းမှုနဲ့အတူ တပြိုင်တည်းလိုလို နုညံ့ငြင်သာတတ်တဲ့ သူ့အပြုအမူကို ကျနော်သဘောကျတယ်။ သူ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ကျနော့် ဆံပင်တွေကြား ဆော့ကစားတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သူ့ပါးစပ်ထဲက လျှာပူပူနွေးနွေးကြီးဟာ ကျနော့်အာခံတွင်းအနှံ့ စမ်းသပ်ရှာဖွေမှုတွေလုပ်နေပြန်ရော အစပိုင်းက ကျနော်လုပ်သလို အတုခိုးတယ်ထင်ပါရဲ့။
"I'm gonna make you mine", သူခပ်တိုးတိုးရေရွတ်တယ်။ သူ အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကို ရေရွတ်ပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာ ကျနော့်အရေပြား တွေဟာ ရှိန်းတိန်းဖိန်းတိန်းပူနွေးလာတယ်ဗျာ။ ချောက်ကမ်းပါးထဲပြုတ်ကျသွားသလိုမျိုး မြောက်ကနဲစိတ်ထဲဟာသွားသလိုပဲ။ သူ ကျနော့် ဗိုက်သားပြင်လေးကို အသာပွတ်သပ်ရင်းမှ အိပ်ရာပေါ်ကိုမှောက်လျက်အနေအထားဖြစ်အောင်ပြုလုပ်စေပြန်တော့ တင်သားဆိုင်တွေဟာ သူ့မြင်ကွင်းဝယ် ငွားငွားစွင့်စွင့်ဖြစ်ကရောပေါ့။ သူ့နှာသီးဝကထွက်လာသော လေပူနွေးနွေးတွေ ကျနော့်တင်သားဆိုင်နှစ်ခုကြားက အကွဲ ကြောင်းနား တဖြည်းဖြည်းတိုးကပ်လာချိန်မှာတော့ မူးမေ့လုမတတ် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလာပါတယ်။ ‘အာ..အ…အ’ ပူနွေးရှည်လျား တဲ့ သူ့ လျှာကြီး ကျနော့်ရဲ့အပျိုစင်ခရေ၀ကို လျက်ပြုကလိချိန်မှာလည်း ရုတ်တရက်ဆိုသလို ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး တဆတ်ဆတ်တုန်ခါ ပြန် ရော။ ကုန်းကုန်းထမိသလို တွန့်လိမ်မိတာကြောင့် သန်မာတဲ့ သူ့လက်တွေနဲ့ ကျနော့်ပေါင်တံတွေကို အိပ်ရာပေါ်ဖိကပ်စေရင်း သူလုပ်လက်စ လျှာကျွေးတဲ့အလုပ်ကို ဆက်လက်ကြိုးစားပါတယ်။ သူ့လျှာကြီးကိုလည်း ခရေ၀ထဲရောက်နိုင်သမျှ ရောက်အောင် ကြိုးစားထိုး သွင်းကလိသေးတာပါ။
ကျနော် လက်သီးတွေကိုကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုပ်ထားမိပါတယ်။ ကျနော် လိုက်လိုက်လျောလျောအနေအထားဖြစ်အောင်တော့ သူ စောင့်စားလိုက် ပြုလုပ်လိုက် ခဏတော့စောင့်ရတယ်လေ။ ကျနော်အလိုက်သင့်ဖြစ်သွားတဲ့တချိန်မှာတော့ ထိတွေ့အာရုံတွေဟာ ပိုပိုတိုးပွားနှစ်သက်လာမိပါတယ်။ လင်းမောင်က တကယ့်ကို အံ့အားသင့်စဖွယ်ကောင်းသူပါ။ ၀ိုင်ပုလင်းဖော့ဆို့ထဲ ဖောက်တံဝက်အူကြီး တဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်သည့်အတိုင်း နက်သထက်နက်အောင် ကြိုးစားဖိသွင်းပါတယ် လျှာကိုပေါ့။ သူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ကျနော့်တင်သားဆိုင် နှစ်ဖက်ကို ထိန်းကိုင်ဖြဲကားပါရဲ့။ ပြီးတော့ အသံတွေကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်ပြုအောင်ပဲ သူ့လျှာမုန်တိုင်းမွှေတာကို ဆက်လုပ် ပြန်ပါတယ်။ သူ့ကြည့်ရတာ ကျနော့်ခရေ၀ စိုစွတ်သထက်စိုစွတ်အောင်ပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေသလိုပါပဲ။ ကျနော့်တင်သားဆိုင်တွေကို သူ အနည်းငယ် ကိုက်ခဲလိုက်ပြီးနောက် သူ့ကိုယ်ကြီးကို ကျနော့်အပေါ်ထပ်သည့်အနေအထားနဲ့ တက်မှောက်ပြန်ပါတယ်။
သူ့ငပဲထိပ်ဖျားခေါင်းဟာ ကျနော့်ခရေ၀ထဲမ၀င်ရုံတမယ် တေ့ဝင်ထားတာကြောင့် သွေးခုန်နှုန်းကိုခံစားမိရသလို စေးကပ်သော အရည်ကြည် တချို့စီးကျနေတာကိုလည်း ခံစားမိရပါတယ်။
“ကိုယ်အတင်းအကြပ်ကြီး မင်းကိုမလုပ်ချင်ပါဘူး၊ တကယ်လို့ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်း ပြောပြနော်" ငြင်းဆိုမယ့်စကားလုံးတွေဟာ အဆုတ်ကနေတစ်ဆင့်တက်လာပြီး ကျနော့်လည်မျိုထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့် လှပအချိုး ကျလွန်းတဲ့ ကြွက်သားဆိုင်တွေနဲ့အတူ ချွေးတစိုစိုနဲ့ကိုယ်လုံးကြီးပိုင်ရှင် ကြည်ပြာတောက်ပသော မျက်ဝန်းနဲ့ အပြုံးလှလှ ဒီငနဲကြီးရဲ့ ဆန္ဒကို ဘယ်လိုလူသားကများ ငြင်းဆန်နိုင်မှာပါလိမ့်?
“လင်းမောင်….ခင်ဗျားကိုသိတာ နေ့တစ်ဝက်လောက်ပဲရှိဦးမယ်….ဒီလိုလူမျိုးကို ကျနော့်ရဲ့ပထမဆုံးလူတစ်ယောက်အဖြစ် ဖြစ်စေချင်မိတာများ ခင်ဗျားထက်ပိုမယ်ထင်ပါရဲ့ဗျာ၊ ခင်ဗျား ကျနော့်လက်ကို ထိကိုင်လိုက်ချိန်မှာ အရာရာလင်းလက်တောက်ပ သွားသလို ခံစားရတယ်။ ခင်ဗျားလဲ အဲ့သလိုခံစားရမလား ကျနော်မသိဘူး၊ ပြီးတော့ လိင်ကိစ္စထက်ပိုပြီး ကျနော့်ဆီက ဘာလိုချင်ဦးမလဲ ကျနော်မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကြားရတာ ရယ်စရာဖြစ်နေမလားမသိဘူးဗျာ…ကျနော်ရနိုင်သမျှ လုပ်နိုင်သမျှ ခင်ဗျားနဲ့ပတ်သက်ချင်မိတယ်" ဒီစကားလုံးတွေက သူ့စိတ်ထဲဘယ်လိုနစ်ဝင်သွားသည်မသိ လင်းမောင်က ကျနော့်ကို သူ့လက်မောင်းတွေနဲ့ရစ်နှောင်ထွေးဖက်ကာ သူ့ရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပါတော့တယ်။
သူ့ရင်ခွင်ထဲ ခဏတာငြိမ်သက်နေမိရရင်း မျက်နှာချင်းဆိုင် ရင်ခြင်းအပ်ချိန်ဝယ် နုနုညံ့ညံ့အနမ်းတစ်ချက် အပါအ၀င် တစ်ယောက်လျှာ ကိုတစ်ယောက်ပါးစပ်ထဲထည့်ကာနမ်းကြပြန်တော့ ကျနော့်တစ်ကိုယ်လုံး အဖျားတက်သလို တုန်ခါလာခဲ့ပါတယ်။ နုညံ့ပါတယ်ဆို သော ကျနော့်ပါးပြင်တစ်ဖက်ကို သူ့နှာတံလေးနဲ့ အသာတို့ထိပေးပြန်တော့ ကြည်နူးသာယာသောစိတ်ခံစားချက်တွေဟာ တစိမ့်စိမ့် တိုးပွားရ ပါရဲ့။ လင်းမောင်က သူ့ခုတင်ဘေးစားပွဲရဲ့အံဆွဲထဲမှ KY Jelly ဘူးကိုဆွဲယူလိုက်တယ်။ ကျနော့်ကိုတော့ အိပ်ရာပေါ်မှာ အသာအယာ ပက်လက်လှန်လဲလျောင်းထားစေရင်း မီးရောင်ထဲမှာတလက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ ဂျယ်လ်အချို့ကို သူ့လက်ညှိုးပေါ်ညှစ်ချ လိုက်သဗျ။ နောက်တော့ ကျနော့်ခရေ၀ထဲကို ခပ်ဖြေးဖြေးထည့်ပေးတယ်လေ။ ဂျယ်လ်တွေကို ညှစ်လိုက် လက်ညှိုးမှာဆွတ်လိုက် ခရေ၀ အတွင်းထဲ ဖိဖိပြီးထည့်ပေးလိုက်လုပ်တာ KY တစ်ဘူးလုံးကုန်လောက်တယ်။ အစပိုင်းကတော့ လက်ချောင်းကလေးတစ်ချောင်းထိုးထည့်တာကိုပဲ နာကျင်နေတာ အချိန်ကြာလာတော့ သာယာမှုတစ်မျိုးခံစားလာရသလိုပါပဲ။ ကုတင်ဘေးကို သူ အသာဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ရင်း ကျနော့် နားရွက်နားကို အသာတိုးကပ်ကာ အထုတ်အသွင်းကိစ္စသူလုပ်ချင်နေမိပြီလို့ပြောသေးတယ်။
သူ ဒုတိယလက်ချောင်းကိုထိုးသွင်းလိုက်ချိန်မှာတော့ ကျနော် ပါးစပ်ကိုခပ်ကျယ်ကျပ်ဟရင်း အသက်ဝအောင်ရှူမိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကြားလောက်တဲ့အထိ အသံမထွက်မိ အသံမပြုမိပါဘူး။ ဒီလောက် ဒီလောက် သာယာမှုပေးသော ခံစားမှုမျိုး အရင်ကမရရှိခဲ့ဖူးဘူး။ အရင်ကကြားဖူးခဲ့တဲ့ နာကြင်မှုမျိုး အခုအချိန်ထိ မခံစားရသေးပါ။ ခရေ၀ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်နေတဲ့ သူ့လက်ချောင်းတွေကို အပြင် ထုတ်လိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ ခြောက်လက်မပေတံထက်ပိုရှည်သော သူ့လက်နက်ကြီးနဲ့ ထိုးသွင်းဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။ ကျနော့်စိတ် တွေ အငမ်းမရဖြစ်လာသလို ပေါင်ကြားကညီဘွားကလည်း အလိုလို စတီးလ်ချောင်းလို မာထန်လာခဲ့ပါပြီ။ တကယ့်ကို ယောက်ျားပီသ တဲ့ တောင့်တင်းမှုမျိုးပါပဲ။
"နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးလေးပေးနော်", သူတကယ့်ကို နုညံ့ငြင်သာတဲ့လေသံနဲ့တောင်းဆိုတယ်။ သူ့ရဲ့တကယ့်ကို တစ်ဖက်သား အပေါ်အခွင့်အရေးဇွတ်မယူတတ်တဲ့စိတ်ကို လေးစားမိရပါတယ်။ နှစ်ဦးသဘောတူမှလုပ်တယ်ဆိုတော့ ကျနော် တိတ်တဆိတ်ငြိမ်သက် ပေးပြီး သဘောတူကြောင်းပြဆိုရပါရဲ့။
သူ့ငပဲကြီးကို ဆက်သွင်းဖို့မကြိုးစားမှီ ကျေနပ်ပြုံးပြုံးလိုက်ရင်းမှ ဆီးစပ်ကိုခွာမရအောင် မတ်ပြီးကပ်နေတဲ့ ကျနော့်ငပဲကိုလည်း တစ်ချက် ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်လိုက်ပါတယ်။
"မင်းလေးကို ချစ်လည်းအရမ်းချစ်မိပြီ ဘေဘီ" နောက်တော့ သူ့ငပဲခေါင်းကို ကျနော့်ခရေ၀ထဲ တအိအိဖိသွင်းပါတော့တယ်။ ရုတ်တရက် ဆိုသလိုပဲ နာကျင်တဲ့ခံစားမှုဟာ ကျနော့်တကိုယ်လုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားသလိုပါပဲ။ ရော့ခ်အဆိုတော်တစ်ယောက်လို အော်ညည်းလုနီးပါး ဖြစ်သွားသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အံ့ကိုကြိတ် တိတ်ဆိတ်နေခဲ့ရတယ်ပေါ့။ ကျနော် လင်းမောင်တစ်ယောက် စိတ်ပျက်မသွားဘဲ ဆက်လက် လုပ်စေချင်မိတာ အမှန်ပါ။ ခဏလေးတော့ ဆက်မလုပ်ဘဲငြိမ်စေချင်မိသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူက ကျနော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို တပ်မက် မွတ်သိပ်စွာ နမ်းရှိုက်လိုက်ပြီးနောက် လမ်းခုလတ်ရောက်နေတဲ့ သူ့ငပဲကို အဆုံးထိထိုးသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ အသက်ရှူဖို့လေမရှိ တော့သယောင် လေကို အငမ်းမရ ရှူရှိုက်မိရသလို အော်လည်း အော်ညည်းခဲ့မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို သူ့နှုတ်ခမ်းသား ခပ်ထူထူတွေနဲ့ ဖိကပ်နမ်းရှိုက်ထားတာ မလွှတ်ဘူးဆိုတော့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ တပ်မက်စွာပြန်လည်နမ်းရှိုက်မိသောသူ ကျနော် ဖြစ်ခဲ့ တာပေါ့။
သူ့ငပဲကို ကျနော့်ခရေ၀ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်ရာမှာ သူ့ကိုယ်လုံးကြီးနဲ့အပေါ်ကဖိထားတာမျိုးမဖြစ်အောင် သူနေတတ် တယ်။ ကျနော်မနာကျင်အောင် အနိုင်ကျင့်သလိုမဖြစ်အောင် သူလုပ်နေမှန်းကျနော်သိတာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ဒီထက်ပိုပြီး သူကျေနပ် အောင် လုပ်ပေးချင်သေးတယ်။ သူ့ငပဲကိုအဆုံးထိသွင်းချိန်မှာ ကျနော့်ခရေ၀ကြွက်သားတွေကို တင်းကနဲနေအောင် ညှစ်ပြုပေးမိတော့ သူ ကျနော့်ကိုနမ်းရင်း အသာအော်ညည်းတယ်ဗျ။
သူ ခပ်သွက်သွက်လေး အထုတ်အသွင်းစလုပ်ပါတယ်။ သွက်သွက်လေးပေါ့။ ကျနော်တို့နှုတ်ခမ်းသားတွေ သော့ခတ်ထားတာကနေ ပြုတ်သွားချိန်မှာ အသက်ကိုအငမ်းမရရှူရှိုက်မိပါတယ်။ သူ့ငပဲကြီးကို အတွင်းထဲကနေ အကုန်လုံးဆွဲထုတ်လိုက် ထိပ်ခေါင်းလေးထိ ရောက်ချိန်မှာ အတွင်းထဲကို တဆုံးဖိသွင်းလိုက်နဲ့ မနှေးမမြန်လေးကြိုးစားတယ်။ ကျနော့်နှုတ်ဖျားက ခပ်တိုးတိုး ညည်းညူသံလေး အဆက်မပြတ်ပြုမိလာတော့ သူ့အထုတ်အသွင်းအရှိန်ဟာ နည်းနည်းမြင့်လာပါတယ်။ သူ့အသက်ရှူသံတွေ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ အငမ်းမရအသွင်ဆောင်လာပြီပေါ့နော်။ ကျနော့်လက်အစုံနဲ့ သန်မောင်တောင့်တင်းသောကြွက်သားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပခုံးကြီး ကို ဆွဲဖက်လိုက်ရင်း ချွေးစေးအချို့နဲ့စေးကပ်နေတဲ့ သူ့ပခုံးကို အနမ်းတစ်ချက် ကျနော်ပေးဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့်နားသံသီးကို သူလျှာနဲ့တို့မိတဲ့ခဏ လှုပ်ရှားတာတွေကို ခဏရပ်တန့်လိုက်ကာ အမောဖြေပါတယ်။ နောက်တော့ သူ့ငပဲကို မှန်တန်း အထုတ်အသွင်းမလုပ်ဘဲ ကော့ပြီးပင့်ထိုးလိုက်တာ ကျနော့်ခရေ၀အတွင်းပိုင်းထဲက တစ်စုံတစ်ခုနဲ့ပွတ်တိုက်မိပြီး ကြက်သီး မွေးညှင်းများဖြန်းကနဲထကာ လူလည်းလွင့်မြောက်သွားသလိုဖြစ်ရော။ ပါးစပ်ကလည်းမထိန်းနိုင် အဆက်မပြတ်အော်ဟစ်မိတာကြောင့် လင်းမောင် တစ်ယောက် ရယ်သွမ်းသွေးပါတော့တယ်။
“အဲဒါက မင်းလေးရဲ့ prostate လေကွာ… ယောက်ျား G-Spot လို့ပြောရ မလားဘဲ” သူပြောလည်းပြော ကျနော့်နားရွက်ဖျားလေးကို ပါးစပ်နဲ့မနာအောင်ကိုက်ခဲရင်း သူ့ငပဲကြီးကို ကျနော့် prostate နဲ့ငြိ အောင် ချိန်ချိန်ပြီး အသွင်းအထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ကျနော့် prostate ကိုပွတ်သပ်နေတဲ့ သူ့အမြူအဆွယ်နဲ့ သူ့ရင်ဘတ်ရဲ့ ကျနော့်ငပဲကို ဖိကပ် ပွတ်သပ်နှိုးဆွမှုကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံး စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ပေါက်ကွဲထွက်မတတ်ဖြစ်လာ ခံစားလာရပါတယ်။
သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံကို ကျနော့်လည်တိုင်ဆီသို့ လှိမ့်ဆင်းသွားပြီးနောက် ပညာစွမ်းတွေအစွမ်းကုန်ထုတ်ပြပါတယ်။ ဒီငနဲကိုကြည့်ရတာ သူဘယ်လောက်စွမ်းကြောင်း တတ်ကြောင်းပြမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးများဝင်နေသလားမသိပါဘူး။ အာ…လင်းမောင် ကျနော့်ခရေ၀ထဲ အထုတ်အသွင်းလုပ်တာ အလွန်သွက်လာတာများ သူ့ရွှေဥတွေနဲ့ ကျနော့တင်သားဆိုင်တွေ ရိုက်ခတ်သံမြည်လာတဲ့အထိပါပဲ။ သူ့လည်တိုင်ကို ကျနော့်လက်မောင်းတွေနဲ့ ယီးလေခိုလိုက်ကာ သူလုပ်လက်စအလုပ်ကို ဆက်လုပ်စေလိုက်ပါတယ်။ တစ်ချက် တစ်ချက် ဖိဖိဆောင့်လိုက်တဲ့ သူ့ပစ်ချက်တွေဟာ ကျနော့်ကို အသက်ရှူမှားစေသလို ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ ကူကယ်ရာမဲ့တဲ့ အတိုင်းဖြစ်နေပါတယ်။
သူ နောက်ငါးမိနစ်လောက် ဆက်တိုက်ဆက်သွင်းထုတ်လုပ်နေရင်းမှ စက္ကန့်လောက်ငြိမ်လိုက်ရင်း ကျနော့်မျက်ဝန်းတွေကိုစိုက်ကြည့် လာပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့လည်း သူကျနော့်ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့သလို မစဉ်းစားမိတတ်သလို မျက်ဝန်းများကိုပြန်လည်ငေးမော မိတာကလွဲလို့ဘာမှ ဆက်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ သူ့ရဲ့ကျစ်လစ်သန်မာသော ချွေးရွှဲနေသော သူ့ရင်အုပ်တွေက မာတောင့်နေဆဲ ကျနော့်ငပဲ ကို ဖိကပ်ပွတ်သပ်နေတော့ ကျနော် ဇာတ်လမ်းအဆုံးသတ်တော့မယ့် ခံစားမှုမျိုး စတင်ခံစားလာရပါတယ်။
"Fuck! လင်းမောင်...ကျနော်…ကျနော် ပြီးတော့မယ်".
သူ ကျနော့်ကိုစိုက်ကြည့်ပြုံးပြလိုက်ရင်း ကူကယ်ရာမဲ့ ကျနော့်ငပဲကိုသူထိကိုင်လိုက်ပါတော့တယ်။ ငပဲထိပ်ကိုခပ်တင်းတင်းသူဆုပ်ကိုင် လိုက်တာကြောင့် ကျနော် မျက်ဖြူလန်မတတ် ဦးခေါင်းကိုအပေါ်လှန်ချလိုက်ရင်း တကယ့်အပြင်းစားအရှိန်နဲ့ သုက်ရည်တွေကို သင်္ကြန် ရေပြွတ်အတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်ကိုဖြန်းပစ်မိပါတယ်။ ချွေးတွေရွှဲနေတဲ့ လင်းမောင်ရင်အုပ်ပေါ်မှာလည်း အဖြူစက်အချို့စွန်းထင်းကုန် တာပေါ့။ ဒီအချိန်မှာ ကျနော့်ခရေကြွက်သားတွေအဟာ ညှစ်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန် လင်းမောင်ရဲ့ငပဲကိုဖျစ်ညှစ်မိရပါပြီ။ လင်းမောင်လည်း ၀မ်းခေါင်းသံထွက်မတတ် အော်ညည်းလိုက်ရင်း ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက် သူ့ငပဲကိုမွတ်သိပ်စွာဆောင့်ဖိသွင်းလိုက်ကာ သူ့သုက်ရည်တွေ ကို ပစ်ထည့်ပါတယ်။ ကျနော့်ခရေ၀ထဲမှာလည်း သူ့ငပဲရဲ့ခပ်တွန့်တွန့်လှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ အရည်တွေပန်းလိုက်တဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ရရှိ လိုက်သလိုပါ။
လင်းမောင် ကျနော့််ရင်ခွင်ထဲလဲပြိုကျကာ တထိတ်ထိတ်ခုန်နေတဲ့ ကျနော့်နှလုံးခုန်သံအနီးကို နားရွက်နဲ့ကပ်လေရဲ့။ သူ့မျက်လုံးတွေ ကို မှေးမှိတ်ကာ ငြိမ်သက်နေတာ မိနစ်အနည်းငယ်တော့ကြာပါတယ်။ ကျနော် ဟိုသည်မျက်စိကစားလိုက်ရင်း နံရံပေါ်က နာရီကို မျက်ခွံပင့်ကြည့်လိုက်မိတော့ ကျနော်တို့နှစ်ဦးချစ်ပွဲဝင်နေတဲ့ကြာချိန်က တစ်နာရီခွဲလောက်ကြာသွားတာကြောင့် အံ့အားတသင့်ဖြစ်သွား မိပါတယ်။ ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲမှ သူ့ဟာသူမတ်ထူရင်း နံဘေးကိုလှိမ့်လှဲလိုက်ကာ သန်မာသော သူ့လက်တွေနဲ့ကျနော့်ကို ရစ်သိုင်းဖက် ပြုပါရော။
ကျနော် သူ့နဖူးပြင်ဝယ် ကပိုကရိုကျနေသော ဆံယဉ်စတွေကို အသာလက်နဲ့ဖယ်လိုက်ပြီး သူ့မျက်ဝန်းတွေကို ငေးကြည့်မိတယ်။ ခဏနေတော့ သူ ကျနော့်မျက်နှာရှိရာကိုငုံ့ကိုင်းလာရင်း နုညံ့သော ပန်းသွေးရောင် သူ့နှုတ်ခမ်းများဖြင့် အနမ်းပေးပါသတဲ့။ သူ့နှုတ်ခမ်းနဲ့ ကျနော့်နှုတ်ခမ်းထိတွေ့လိုက်ချိန် ခံစားလိုက်ရသော ခံစားချက်နဲ့တကွ ရနံ့ကို ဘယ်အချိန်တွေးတွေး လွမ်းဆွတ်ပါတယ်။ Aftershave အနံ့နဲ့တကွ လင်းမောင်ရဲ့ကိုယ်သင်းနံ့အရောလေးက ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အနံ့လေးထွက်နေတော့တာလေ။ မှေးတစ်ဝက် ဖွင့်တစ်ဝက် မျက်တောင်ရှည်တွေနဲ့ဝန်းရံနေသော သူ့မျက်ဝန်းတွေကို ကြည့်မိပြန်တော့ ကျနော့်စိတ်ထဲ ကြည်နူးမှုနဲ့သာယာမိပါတယ်။
"ကိုယ်တို့ရေချိုးဖို့လိုပြီထင်တယ်" နုနုညံ့ညံ့ဖိကပ်ထားသော သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံကို ကျနော့်နှုတ်ခမ်းသားတွေကဖယ်ရှားရင်းသူပြောတာပါ။ သဘောတူကြောင်း ခေါင်းအသာငြိမ့်ပြလိုက်တော့ သူ ကျနော့ကိုပွေ့ချီလိုက်ကာ ရေချိုးခန်းရှိရာကိုသယ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။ ရေချိုးဖို့ ရေချိုးပန်းခေါင်းက တကယ်ကြီးလွန်းတာများ ကားတာယာအ၀န်းအ၀ိုင်းလောက်ရှိပါတယ်။ လင်းမောင် ရေခလုပ်ကိုဖွင့်လိုက် ချိန်မှာတော့ ရေတံခွန်အောက်ကိုဝင်ပြီး ရေချိုးနေရသည့်အတိုင်း ခံစားရပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုယ်လုံးတွေပေါ်မှာ ပေကျံနေတဲ့ ချွေးစေး တွေ သုက်ရည်တွေကနေ သန့်စင်ဖို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဆပ်ပြာစတိုက်ပေးကြပါရဲ့။
ကျနော် တောင့်တင်းကျစ်လစ်ကာထင်းနေသော သူ့ရင်အုံတွေကို ဆပ်ပြာစတိုက်ပေးရင်း ရေပန်းကြောင့် အပေါ်ကနေ အောက်သို့ အဆင့်ဆင့် စီးဆင်းသွားတဲ့ ဆပ်ပြာရေစီးကြောင်းကို ကြည့်ရတာတကယ် မိုက်တယ်ဗျာ။ နောက်တော့သူက ကျနော့်နောက်ပိုင်းက တင်သားဆိုင်တွေသာမက အကွဲကြောင်းတလျှောက် ဆပ်ပြာတိုက်ပေးရင်း စနောက်ပါတယ်။ ပြီးပြန်တော့ သူ့လက်ချောင်းတွေကို ကျနော့်ခရေ၀ထဲထိုးသွင်းဖို့ ကြိုးစားပါတယ်။ ကျနော့်မှာ သရဲတွေ့တဲ့အတိုင်း အော်ဟစ်ကာ သူ့နားကနေ အဝေးကိုခွာဖို့ကြိုးစား ပါတယ်။
"ဟေး…ဟေး…အဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေ….ဒီလိုဆိုရင်တော့ နောက်တစ်ခါထပ်မလုပ်ပေးဘူးနော်" လင်းမောင် နှုတ်ခမ်းတစူစူနဲ့ပြောတာများ တကယ်ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းပါတယ်။
"I'm just playing baby", ကျနော့်ကိုဆွဲလွှဲပြီးနောက် ခရေ၀ကိုထိတွေ့ဖို့သူကြိုးစားရင်း သူ့ကိုယ်သူ အထင်တကြီးလေသံတစ်မျိုးဖြင့် ပြောပြန်တယ်။ ကျနော်လည်း သူ့ရွှေဥတွေကို လက်ခလယ်နဲ့ ခပ်ပြင်းပြင်းတောက်ပစ်လိုက်တယ်လေ။ သူ နာနာကျင်ကျင်အော်ဟစ်ရင်း ဒူးညွှတ်ကျမတတ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျနော်လည်း သဘောတကျရယ်ရလွန်းလို့ ဒူးထောက်ချမတတ်ပဲပေါ့။ သူ့နာကျင်မှုက သိပ်မခံစား ရဘူးနဲ့တူပါတယ် ကျနော့်ကို မတဲ့ပြီး ရေချိုးခန်းဖန်တံခါးကို ကျောကပ်စေကာ လက်နှစ်ဖက်ကို အပေါ်မြှောက်ချုပ်ကိုင်ရင်း နံရံမှာ ဖိကပ် ထားပါတော့တယ်။
"ဒါကိုရယ်စရာတစ်ခုလိုထင်တယ်ပေါ့လေ!" ကျနော့်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးပြောတော့ ကျနော် အသာအယာပဲ ပခုံးပင့်ပြလိုက်ပါတယ်။
သူ့မျက်ဝန်းတွေ တောက်ပလာခဲ့သလို သူ့ငပဲရဲ့လှုပ်ခါမှုကို ကျနော်မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူကျနော့်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ပြန်နမ်းရင်း အထူးတခြား သူ့လျှာကြီးကို ကျနော့်ပါးစပ်အတွင်းထဲသို့ ခပ်နပ်နပ်ထိုးသွင်းပါတော့တယ်။ ကျနော့်မှာ ရင်ထဲကလှိုက်ကနဲဖြစ်ကာ စိတ်ထဲရှိန်းကနဲတက်လာတာကြောင့် အသာအယာညည်းညူရင်း သူ့လည်တိုင်ကို ကျနော့်လက်တွေနဲ့ခိုဟီးလိုက်ပါတယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်း သားတွေရဲ့ အရသာက တကယ်ချိုမြိန်ပါရဲ့။ သူက နောက်ဆုတ်ဆွဲခွာသွားရင်း ကျနော့်လည်တိုင်တွေဆီ အနမ်းပြင်းပြင်းပေးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုအသာဖျော့ထားရင်း သူပြုသမျှနုနေတဲ့ ဒီအခြေအနေဟာ သူ့စိတ်အနေအထားကို သတိလစ်စေပါတယ်။
ကျနော် ကရာတေးကိုလေ့ကျင့်ကစားလာတာ ဆယ့်တစ်နှစ်မကရှိထားပြီဆိုတော့ အခုလိုချုပ်ကိုင်ခံထားရတဲ့ အနေအထားကနေ ဘယ်လို ရုန်းထွက်ရမယ်ဆိုတာ အတိအကျကိုသိပါတယ်။ သူ့ညာခြေကျင်းဝတ်ကို ကျနော့်ဘယ်ခြေထောက်နဲ့ကန်ကာ ခပ်သွက်သွက် လှုပ်ရှားလိုက်တော့ ကျနော့်လက်ကောက်ဝတ်တွေကို ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ သူ့လက်တွေပြေလျော့သွားပါရော။ ကျနော့်ဘယ်ဘက်လက်ကို ရုန်းထွက်လိုက်ပြီး သူ့ရင်အုပ်ကိုနောက်ဘက်ဆီတွန်းထုတ်လိုက်တော့ ညာဘက်လက်လည်း အလားတူလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ အင်အားသုံးရုန်းကန်မှုကို သူ အံ့အားသင့်နေပုံရပါတယ်။
ကျနော် သူချုပ်ကိုင်ထားတာကို အင်အားသုံးပြီးလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားလိမ့်မယ်လို့ သူမျှော်လင့်ထားပုံမရပါဘူး။ ‘ပြီးပြီလို့မထင်နဲ့ နော် ဘော်ဒါကြီး’ လို့ ကိုယ့်ဟာကိုတွေးမိသလို သူ့ကိုပြေးကန်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ဘယ်ခြေညွှတ်ကျရင်း ဦးခေါင်းနဲ့ကြမ်းပြင် မရိုက်မိခင် ကျနော့်လက်နဲ့ဖမ်းဆွဲလိုက်ကာ ခန္ဓာကိုယ်ကို အသာအယာလဲကျစေမိပါရဲ့။
ကျနော်သူ့ကိုခွထိုင်လိုက်တော့ ငပဲက ကျနော့်တင်ကွဲကြောင်းထဲ ထောက်ပြုနေတဲ့အထိအတွေ့ကို ခံစားရပါတယ်။ သူ ကျနော့်ကို စကားမဆိုနိုင် အံ့အားတသင့်ကြည့်နေတာကြောင့် အသံထွက်ရယ်မောမိရတယ်ဆိုပါတော့။ ကျနော့်လို အရပ်အမြင့် ၅ပေ၈လက်မ လောက်ရှိပြီး ခပ်ပိန်ပိန်ငနဲလေးက အရပ်အမြင့် ၆ပေ၃လက်မလောက်ရှိပြီး ကြွက်သားအပြည့်နဲ့ ဘူထွားကြီးရဲ့ချုပ်ကိုင်မှုကနေ လွတ်မြောက်သွားတာကိုးလေ။ ကျနော် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဂုဏ်ယူမိတဲ့ ခံစားမိမှုနဲ့အတူ သူ့မျက်နှာဆီငုံ့ကိုင်းလိုက်ရင်း နှုတ်ခမ်းထူ အမ်းအမ်းလေးကို အနမ်းတစ်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူကလည်း နှစ်လိုစွာလက်ခံသလို မွတ်သိပ်စွာပြန်လည်တုံ့ပြန်နမ်းရှိုက်ပါတယ်။
"Holy shit ဇေယျာ! အဲဒါကိုဘယ်မှာသင်ခဲ့တာလဲ? ကိုယ်တော့ကြောက်တောင်လာပြီ Mr.Miyagi က မင်းလေးရဲ့အဖိုး ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခုဖြစ်ရမယ်" နှစ်ဦးသား ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောမိကြရင်း အခြားအထူးအထွေဆက်မလုပ်ဖြစ်ဘဲ ရေဆက်ချိုးကြပါတယ်။ ရေချိုးခန်းတစ်ခုလုံး ရေငွေ့တွေနဲ့မှုံမှိုင်းသလိုဖြစ်လာချိန်မှာတော့ လင်းမောင်က ရေပန်းခေါင်းကိုပိတ်ပစ်လိုက်ကာ တစ်ဘက်အကြီးနှစ် ထည်ကိုယူဖို့အပြင်ထွက်သွားပါတယ်။ ကျနော်လည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်သွားချိန်မှာတော့ သူ့လက်ထဲကတဘက်နဲ့ကျနော့်ကိုယ်အနှံ့ လက်သွက်သွက်နဲ့ခြောက်သွေ့အောင်သုတ်ပေးပါတယ်။ ကျနော့်မျက်နှာနဲ့ဦးခေါင်းပေါ်က သူ့တဘက်ကြီးဖယ်သွားတော့ အမွှေးတွေက နေရာအစုံကို ထိုးထိုးထောင်ထောင်ကိုဖြစ်လို့ပါ။ ကျနော့်ကိုယ်ပေါ်ကအစိုဓာတ်တွေ မရှိတော့တဲ့အထိ တဘက်နဲ့ခြောက်သွေ့အောင် သုတ်ပေးတာကို မရပ်ဘူးလေ။ နောက်တော့ သူ့ကိုယ်သူခြောက်အောင်သုတ်ပြီး သူ့အိပ်ခန်းထဲကိုသွားဖို့ကျနော့်ကိုပြောပါတယ်။
ကိုယ့်ဖာသာခွဲအိပ်ဖို့အိပ်ရာသပ်သပ်မရှိဘူးဘဲ မွေ့ယာကြီးကအကြီးကြီးလေ။ လင်းမောင်ရဲ့ အံဆွဲတွေကိုလှန်လှောကာ ကျနော်နဲ့ တော်တဲ့ ၀တ်လို့ရတဲ့တစ်ခုခုရှိမလား ရှာဖွေမိပါတယ်။ ရာသီဥတုကလည်း ပူအိုက်နေတာကြောင့် boxer ဘောင်းဘီပဲဝတ်မယ် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အနက်ရောင် boxer ဘောင်းဘီတစ်ထည်က ကျနော်နဲ့အံကိုက်ဖြစ်တာကြောင့် အသာလေးလျှိုဝတ်ရင်း အိပ်ရာပေါ်မှာ ထိုင်ကာ လင်းမောင်ကို စောင့်နေလိုက်တယ်လေ။ သူက အဖြူရောင် boxer ဘောင်းဘီတစ်ထည်နဲ့ပေါ်လာရော။
"အဲ…အဲ့ boxer ဘောင်းဘီကဘယ်ကယူဝတ်လာတာလဲဗျ? ကျနော်က ဒီအံဆွဲထဲမှာပဲ အတွင်းခံအ၀တ်အစားတွေရှိတယ် ထင်နေတာ..." ကျနော်မေးလိုက်တယ်။
"ဒီမှာလေ မှန်နောက်မှာ ဘီရိုရှိတယ်" ရေချိုးခန်းဘေးက ကြေးမုံချပ်အကြီးကြီးရဲ့နောက်မှာရှိကြောင်း သူပြတယ်။
မှန်ကိုဖိပြီးဘေးကိုတွန်းလိုက်တော့ ဘီရိုပေါ်လာတယ်။ ဘီရိုက ကျနော့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဟာထက်တောင်ကြီးနေသေးတယ်။ Suits တွေ ရှူးဖိနပ်တွေ၊ ဈေးကြီးတဲ့ ထသွားထလာရှပ်အ အကျ င်္ီတွေနဲ့အတူ ‘Creed’ by ‘Aventus’ တို့လိုနာမည်လေးတွေရှိတဲ့ Colognes တွေရယ် ကျနော့်လို ဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်လူမျိုးတောင်မသိတဲ့ အခြားအမည်ပစ္စည်းတွေရှိနေပါတယ်။
သူ့အိပ်ရာရှိရာကို ကျနော်ပြန်လှမ်းလာတော့ သူက အိပ်ရာပေါ်မှာလှဲလျောင်းကာ စောင်ပါးတစ်ထည်ကိုခြုံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ရာရဲ့ အစွန်းတစ်ဘက်မှာတော့ ညအိပ်မီးရှိနေသလို လေအေးပေးစက်ကလည်း ခပ်ပါးပါးလွင့်နေပါတယ်။ အိပ်ရာတစ်ဖက်စွန်းမှာအိပ်နေတဲ့ လင်းမောင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ မျက်နှာကျက်ကိုငေးကာ အတွေးဝင်နေပုံတွေ့ရပါရဲ့။ ကျနော်အသာဝင်လှဲလိုက်ချိန်မှာတော့ ကျနော့် ဘက်လှည့်ကာ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရင်း ပြုံးပြပါတယ်။ သူ့ပါးပြင်အစုံက ပါးချိုင့်နှစ်ခု ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာချိန်မှာ ကျနော့်ဗိုက်ထဲက တစ်ခုခု နာကျင်မိရသလို ဘာမှန်းမသိ ခံစားလိုက်ရတယ်ဗျ။
"ဒီဘက်တိုးခဲ့ပါကွာ…မင်းလေးကလည်း အစွန်းမှာဘေးကပ်အိပ်နေတယ်’’ အိပ်ရာအကျယ်ကြီးမှာ သူကတဘက် ကျနော်က အစွန်း တစ်ဘက်မှာ အိပ်နေသလိုဖြစ်တာကြောင့် သူကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော့်ကို သူမဖိတ်ခေါ်ခင်အထိတွေးနေမိတာက သူဟာ တော်တော့်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းဟာ ပြည့်စုံလှပနေတဲ့လူ တစ်ယောက်ဘဲလို့လေ။ သူ့အနားကိုတိုးကပ်အိပ်ဖို့ပြောလာချိန်မှာတော့ သူ့အနားတိုးကပ်သွားရင်း ကျနော် ရင်တထိတ်ထိတ်ခုန် လာသလို ပိုပိုပြီးနှစ်သက်မိရပါတယ်။
ကျနော့်ဦးခေါင်းကို သူ့ရင်ခွင်ထဲတိုးကပ်အိပ်လိုက်ချိန်မှာတော့ ကျေနပ်ရောင့်ရဲသွားတဲ့ဟန်နဲ့ သူ သက်ပြင်းတစ်ချက်ချပါတယ်။ သူ့လက် မောင်းနှစ်ဖက်နဲ့ ကျနော့်ကို နုညံ့ငြင်သာစွာထွေးဖက်ပါတယ်။ အရမ်းကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဖက်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ အေးဆေးသက်သာ ဖက်တွယ်ထားခြင်းဖြစ်တာကြောင့် လုံခြုံစိတ်ချပြီး အကာအကွယ်ရတဲ့ခံစားမှုမျိုး ကျနော်ခံစားရပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့နှုတ်ခမ်းသားလေး တွေနဲ့ ကျနော့်နားရွက်တွေကို တို့ထိပွတ်သပ်တယ်လေ။
"You're all mine now" သူ့စကားသံကိုကျနော်ကြားလိုက်ရတဲ့ခဏ တစ်ကိုယ်လုံးဆတ်ခနဲတုန်လှုပ်သွားမိရသလို ကျနော့်နဖူးပြင်နဲ့ ကျနော့်ဆံနွယ်တွေကို သူ့နှာတံနဲ့တို့ထိနမ်းရှိုက်တာကြောင့် ကြည်နူးနှစ်သိမ့်ရပါတယ်။
အေးဆေးတိတ်ဆိတ်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဝယ် ခိုင်မာနွေးထွေးသော လင်းမောင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာ အသာငြိမ်သက်မိတဲ့ ကျနော်ဟာ အချိန် များစွာမကြာခင်မှာဘဲ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မောကျသွားမိပါတယ်။
အတိတ်…..ပစ္စုပ္ပန်……အနာဂတ်…ဘာမှ မသိချင်လောက်အောင် ညလေးက သာယာလွန်းတယ်လို့ဆိုပါရစေ..။
Alex Aung (17 May 2016)
Posted by Alex Aung at 2:36 PM No comments:
မိနစ် ၂၀တိတိရှိပြီစောင့်လိုက်ရတာ။ တော်တော်စိတ်ရှည်ပြီးစောင့်ရတဲ့အဖြစ်။ တော်ရုံတန်ရုံဆို ကျွန်တော်က အချိန်တိကျမှကြိုက်တာ။ ၅မိနစ်လောက်စွန်းပြီဆိုတာနဲ့ စောင့်ချင်တော့တာမဟုတ်ဘူး။ အခုတော့ ဇေယျာ့ကို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ရတော့တာပေါ့။ သူနဲ့ ကျွန်တော် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ညီရင်းအစ်ကိုလို သဘောထား ဆက်ဆံခဲ့ကြတာပါ။ ကျွန်တော်ကလေးအရွယ်ရင်ခွင်ပိုက်ဆိုပါတော့ အဲဒီ့အချိန်ကတည်းက သူတို့မိသားစုရဲ့ မွေးစားခြင်းကို ခံခဲ့ရတာလေ။ သွေးသားရင်းချာ ညီအစ်ကိုဆက်ဆံရေး စိတ်ထားမျိုးကျတော့ လည်း မရှိပြန်ပါဘူး။
ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက သူ့ရဲ့အသွင်အပြင်တွေ လူကြီးဖြစ်လာမှုတွေကို အမြဲစောင့်ကြည့်နေဖြစ်ခဲ့တာဗျ။ ရွှင်ပျသွက်လက်သော သူ့ရဲ့ သဘောထားဟန်ပန်တွေက ကျွန်တော့်ကို အမြဲဆွဲဆောင်ညှို့ယူနေတတ်ခဲ့တာပေါ့။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက ဖိုးသန့်ရှင်းလေး ဇေယျာ ဟာ တဖြည်းဖြည်းအရွယ်ရောက်လာတော့ အရပ်မြင့်မြင့် ဖြူဖြူသန့်သန့်နှင့် ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်ဖြစ်လာသူပါ။ ကောင်မလေး တွေခမျာ သူမဆွတ်ခင်က ညွှတ်ချင်နေကြသူများပါတယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ စံပယ်ဖြူနှင့် မတွေ့ခင်အထိ ရှူးဖိနပ်မ၀တ်ခင် ခြေအိတ်လဲ လှယ် သလိုကို ကောင်မလေးတွေကိုလဲလှယ်နေတတ်ခဲ့တာပါ။
သူတို့နှစ်ဦးချစ်သူဖြစ်သွားကြတော့လည်း နတ်ဖက်တဲ့စုံတွဲလို့ ပြောလို့ရတဲ့အထိ လိုက်ဖက်ညီလှပါရဲ့။ စံပယ်က သွက်လက်ထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီ ဇေယျာကို ဘယ်လိုထိန်းရမယ်ဆိုတာ သိဟန်တူပါတယ်။ ကျောင်းမှာလည်း တတွဲတွဲနှင့်ပေါ့။ မာမီတို့နှင့် ခေါ်တွေ့ပေးတဲ့နေ့ကများ အိမ်မှာ ရယ်မောသံတွေ လွှမ်းနေရော။
Sweet December ရဲ့နေ့လေးတစ်ရက်မှာ သူတို့လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ မာမီတို့ခမျာ သူတို့အချစ်ဆုံးသားလေးပျော်နေတာ မြင်ရ တော့ ၀မ်းသာပြီး စိတ်ချမ်းသာနေကြတာ ကျွန်တော်လည်းအပါအ၀င်လေ။
အိမ်မှာကလေးနည်းတာဆိုတော့ ကလေးအမြန်ယူစေချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့စံပယ်က လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုယ်ပိုင်လုပ်ကိုင်နေသူ အမျိုးသမီး ဖြစ်တဲ့အတွက် အခြေကျအောင် နှစ်နှစ်လောက် စောင့်ချင်ပါသေးတယ်တဲ့။ နောက်ဆုံးတော့လည်း မိသားစုလေးတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးသကာလ အားလုံးပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။ ဇေယျာရဲ့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့မျက်နှာဟာလေ ပါးချိုင့်များပင်ပေါ်လို့ပါ။
ဒါပေမဲ့ စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်က စံပယ်သူ့မိဘအိမ်က အပြန်လမ်းမတစ်နေရာမှာ ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ပြီး ဆုံးပါးသွားရပါတယ်။ ဘယ် လိုမှ မထင်မှတ်စွာ ရုတ်တရက်ခွဲခွာသွားခဲ့တာပေါ့လေ။
ဇေယျာ...ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်စွာ အချိန်အတော်ကြာလေနေသေးတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုယ်သူ စီးပွားရေးထဲမှာ နှစ်မြှုပ်ပစ်လိုက်ရင်း ၀မ်းနည်းမှုကနေဆွဲထုတ်ပစ်လေရဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျောင်းပြီးပြီးခြင်း အစိုးရ၀န်ထမ်း အဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့တာ ပင်လယ်ကမ်းခြေ မြို့လေးမှာ အခြေကျနေပါပြီ။ အဲဒီကတည်းက ချစ်လှစွာသော ညီကလေး ဇေယျာနှင့် မတွေ့ဖြစ်တာ ၅နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီဆိုပါတော့။ မနေ့က ဖုန်းလာတယ်....ဒီကမ်းခြေမှာ သူ့စီးပွားရေးအကွက်အကွင်းရှာရင်း ကျွန်တော့်ဆီခဏနေမယ်တဲ့။
တံခါးဘဲလ်မြည်သံကြောင့် တံခါးမကြီးဆီ လှမ်းအသွားမှာတော့ မောပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ ပန်းလျအသွင်နဲ့ဇေယျာ့ ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ ဇေယျာ ပုံစံက ညှဉ်းသိုးသိုးနဲ့ အ၀တ်အိတ်တွေမှာလည်း ရွှံ့တွေနဲ့ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်တွေကိုဆန့် ရင်ခွင်ကိုဖွင့်လိုက်ရင်း သူ့ကို ကြိုဆိုဖြစ်ခဲ့ပေါ့။ မိုးရေထဲမောင်းလာခဲ့ရတော့ ရွှံ့တွေလည်းကားမှာပေ လူလည်းမောပန်းနေပုံဆိုတော့ ရေချိုးခန်းကို ချက်ချင်း ညွှန်ပြလိုက်ရတဲ့အပြင် ရေပူနဲ့ချိုးဖို့ကိုလည်း လှမ်းပြောလိုက်ရပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ညစာစားဖို့ပြင်ဆင်လေသတည်းပေါ့။
သူသွေးနွေးသွားစေဖို့ ရေချိုးပြီးပြီးခြင်းသောက်ဖို့ ရမ်တစ်ခွက်ငှဲ့လိုက်ရင်း ရေချိုးခန်းထဲက ထိုင်ခုံလေးဆီယူဆောင်အလာ ဖန်တုံးတွေနဲ့ ကာထားတဲ့ရေချိုးခန်းထဲက ရေချိုးနေဆဲ ဇေယျာရဲ့ ကိုယ်လုံးပုံရိပ်ဝိုးတ၀ါးကို ရင်ခုန်ဖွယ်မြင်မိရပါတယ်။ သူ့ကြည့်ရတာ ရေနွေးနွေးတွေ ကြား အညောင်းအညာဖြေနေဟန် အနည်းငယ်ကြာကြာရပ်နေလေ့။ ရေစက်တွေက သူ့ကျောပြင်ကြား တလှိမ့်လှိမ့်ဆင်း.....။
အတန်ကြာငေးမိပြီးနောက် ချက်ပြုပ်ပြင်ဆင်လက်စ မီးဖိုခန်းဆီပြန်လာဖြစ်ပါတယ်။ Shampoo နံ့သင်းသင်း၊ တီရှပ်တစ်ထည် ကိုယ် မှာစွပ်ကာ boxer ဘောင်းဘီတိုနှင့်ဇေယျာပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ဘယ်လောက်ချောမောခန့်ငြားတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့သူ လေးလည်း။ သူ့လက်ထဲမှာတော့ ကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့ Rum ထည့်ထားသောဖန်ခွက်က နေရာယူထားပြီး အဲဒါကို တစ်ငုံခြင်းသောက်ကာ တွေ့စကထက်ပိုပြီး သွက်လက်အသက်ဝင်လာတဲ့ဟန်ပန်ဖြင့် မီးဖိုနားလှမ်းလာပါတော့တယ်။
စားပွဲခုံပေါ် စားဖွယ်ရာတွေပြင်ဆင်ပြီးချိန်မှာတော့ အတူထိုင်ကြကာ ပြောမကုန် သတင်းစုံပြောရင်း စားသောက်ကြပါတော့တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဧည့်ခန်းထဲက ဆိုဖာဆီရွှေ့ဖြစ်ကြကာ ပြောနေတဲ့စကားအကြောင်းအရာကလည်း စံပယ့်အကြောင်းတွေဆီပြောင်းလဲ သွားပါပြီ။ ခဏအကြာမှာတော့ သူ့မျက်ဝန်းတွေမှာ မျက်ရည်တွေရစ်သီလာပြီး နောက် စံပယ့်အဖြစ်ဆိုးတွေ သူပြောပါရော။ သူရုတ်တ ရက်စကားပြောဆိုတာကိုရပ်လိုက်ကာ ငိုရှိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော် သူ့အနားကပ်ထိုင်လိုက်ရင်း ပခုံးတွေကိုဖက်တွယ်လိုက်ကာ နှစ်သိမ့်ပေးမိတော့ သူကျွန်တော့်ကိုပြန်လည်ဖက်တွယ်လိုက်တာ ကျစ်ကျစ်ပါရော။ သူ့လက်များဟာ ပခုံးများမှ ကျွန်တော့်ဦးခေါင်းဆီ တဖြည်းဖြည်းပြောင်းကာ သူ့ဆီဆွဲယူလိုက်ရင်း အနမ်းတစ်ချက်ပေးလိုက်တာ နှုတ်ခမ်းများဆီကို.....ကျွန်တော်...ကျွန်တော် တကယ့်ကို shock ဖြစ်သွားတယ်။
အစတော့ ဘာလိုလိုနဲ့ ဆွဲဖယ်မိပါသေးတယ်။ နောက်တော့ အသာငြိမ်ပြီး သူ့နှုတ်ခမ်းရဲ့နုညံ့မှုမှာမျောပါလေ့။ ဇေယျာ ကျွန်တော့် မျက်နှာက အသာခွာကာ မျက်ရည်အပြည့်ဖြင့် ဆောရီး ဇော် ၊ ညီ့စိတ်တွေဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး ကျွန်တော်ပြောဖြစ်ရတာက အိုကေ ပါကြောင်း၊ သူစိတ်သက်သာရာရဖို့လိုအပ်နေတာကို နားလည်ပါကြောင်းပေါ့။ နောက်ထပ်တစ်နာရီလောက် စကားဆိုကြပြီးနောက် သမ်း ဝေလာကြကာ အိပ်ခန်းဆီသွားဖို့ အနားယူဖို့ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အိပ်ခန်းဆီရောက်တော့ ဇေယျာ့ကို အိပ်နှင့် ရေချိုးလိုက် ဦးမယ်လို့ပြောရင်း ရေချိုးခန်းဆီလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ရေချိုးခန်းထဲ ၁၀မိနစ်လောက်ကြာပြီးနောက် ပြန်ထွက်လာတော့ ဇေယျာက အိပ်ယာ ပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေပြီ။ ကျွန်တော်လည်း သူ့ဘေးမှာ အသာလှဲလျောင်းကာ ဇေယျာဘာကြောင့် အဲဒီ့အနမ်းကို ချွေရသလည်း ၊ ခဏဖြစ် ပေါ်လာတဲ့ သူ့ခံစားချက်သက်သက်အတွက်လား။ အားလုံးဆင်ခြင်ကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးသည် Straight Guys တွေ ညီအစ်ကိုရင်းတွေလို ခံစားချက်မျိုးကြတော့လည်း.....ပြောရခက်သားပါ။
အိပ်ယာပေါ်မှာအသာ တစောင်းလှဲရင်းငြိမ်သက်နေမိစဉ်ခဏ သူ့လက်မောင်းတွေက ကျွန်တော့်ပခုံးဆီဖက်တွယ်လာတာကို ခံစားလိုက် ရပါပြီ။ အဲဒီခဏတာအချိန်းလေးမှာပဲ သတိမူမိတာက သူ့ဘောင်းဘီဟာ အိပ်ယာအောက်ခြေဆီလျှောကျနေပြီလေ။ မပျော့မမာ သူ့ငပဲ ဟာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံထဲ ထိကပ်လာတာကို ခံစားရမိတယ်။ တွေးမိရတာကတော့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ နောက်အမျိုးသား တစ် ယောက်နဲ့ ဘယ်လိုများ လိင်ဆက်ဆံပါလိမ့်လို့။ ဒီအထိအတွေ့ကို မရခင်အထိ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသားရဲ့ ညီအစ်ကိုဆက်ဆံရေးမှာ အမှားအယွင်းမရှိတာသေချာပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လှဲလျောင်းနေရင်း ဇေယျာ့ရဲ့ အိပ်မောကျနေမှုကို သိနေရသလို တဖြည်းဖြည်းသိရှိခံစားလာရတာကတော့ သူအကြောင်း အရာ တစ်ခုခုကို အိပ်မက်နေတယ်ဆိုတာ။ ရုတ်တရက် သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတိုးကပ်လာသလို ကျွန်တော့်ကိုဆွဲဖက်ပါရော။ ကျွန်တော့် ပေါင်တံတွေဆီမှာတော့ သူ့တင်ပါးရဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ ငပဲရဲ့မာတောင်လာမှုကို ခံစားရပါပြီ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်လာ တော့ကာ သူ့ပေါင်ခြံဆီလက်လှမ်းလိုက်မိပါတယ်။ ပူနွေးမာတောင့်နေတာ....ဘယ်တုန်းကမှ တစ်ခြားယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အင်္ဂါ ကိုမကိုင်တွယ်ဖူးတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အထူးအဆန်းပါပဲ။ အသာအယာ ကိုင်တွယ်မိရင်းပြောနိုင်တာကတော့ အတော်အသင့်ကြီး တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကျွန်တော့်ထက် အတော်ရှည်သလို တုတ်လည်းတုတ်သည်။
လက်နှင့်ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကြောင့်ထင်ပါရဲ့ သူ့ညှောင့်ချက်တွေဟာ တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်လာပြီး လက်မှာလည်း pre-cum တစ်ချို့ စွတ်စို စပြုလာပါတယ်။ သူ့ဆောင့်ချက်တွေဟာ ကျွန်တော့်လက်အစုံကြားသွက်သထက်သွက်လာသလို ပါးစပ်က ညည်းတွားမှု သံစဉ်တွေဟာ လည်းမြန်ဆန်လာပါတော့တယ်။ ခဏအကြာမှာတော့ ပူနွေးတဲ့အရည်တွေဟာ ကျွန်တော့်လက်အစုံထဲ စိုရွှဲသွားပါတယ်။ ကျွန်တော် အတန်ကြာငြိမ်သက်နေမိပြီးနောက် လက်ချောင်းတွေကြားက အရည်တွေကို လျှာနဲ့တို့ထိကြည့်မိပါတယ်။ အရသာတစ်မျိုးပဲ...မဆိုးဘူး လို့ ခံစားရမိတော့ လက်ပေါ်ကဟာတွေကို ကျွန်တော့်လျှာနဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်မိတယ်။
ဇေယျာကတော့ တဖက်သို့စောင်းသွားကာ အိပ်မောကျလေရဲ့။
ကျွန်တော့်မှာသာ စိတ်တွေ ကယောက်ကယက်လေ။ တစ်ခြားယောက်ျား တစ်ယောက်ရဲ့ ငပဲကိုကျွန်တော့်ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ပြုရရင်ဘယ်လိုဖီလင်များခံစားရမှာလည်းတွေးတောမိကာ ကျွန်တော့်ငပဲဟာလည်း မာ ထောင်လာတော့ ညာလက်ငါးချောင်းနှင့် အပြည့်အ၀ဆုပ်ကိုင်ကာ pumping လုပ်ရလေသည်ပေါ့။ အိုး....တစ်ယောက်ယောက်ဘေးမှာထားပြီး ထုရတဲ့ဖီလင်ကမိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ ခံစားမှုအဟုန်မြင့်ကာ ကျွန်တော့်လက်တွေ၊ ရင်ဘတ်တွေစိုရွှဲရပြန်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အရည်တွေကိုလည်းလျက်ကြည့်မိပြန်တော့ အရသာကတစ်မျိုးပဲ။ ဇေယျာ့ဟာနဲ့မတူဘူး။ မျက်ခွံများဟာလေးလံလာကာ အိပ် မောကျသွားရပါတယ်အချိန်အတော်ကြာချိန်မှာတော့။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်လက်အစုံကို လှုပ်ရမ်းမှုနှင့်အတူ လတ်ဆတ်သင်းပျံ့တဲ့ကော်ဖီနံ့ကြောင်း မနက်ခင်းမှာနိုးထခဲ့ရပါပြီ။
ကျွန်တော် မီးဖိုချောင်ထဲ လျှောက်သွားမိတော့ T-Shirt နဲ့ boxer pant နဲ့အတူစားပွဲမှာထိုင်ရင်း ကော်ဖီကိုတစ်ငုံချင်းသောက်နေတဲ့ ဇေယျာ့ကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဘယ်လိုလှပတဲ့ဘော်ဒီပိုင်ရှင်လည်းဆိုတာ ကျွန်တော်သတိရမိသွားရတယ်။ တောင့်တင်းဖြောင့်စင်းတဲ့ သူ့ အနားမှာ မိန်းကလေးတွေ တ၀ဲဝဲဖြစ်ခဲ့တာမှတ်မိရပြန်တယ်ပေါ့။ သူအပြုံးတစ်ပွင့်ချွေလိုက်ရင်း ကျွန်တော့်ကိုပြောတာက ကျွန်တော်အိပ် ပျော်နေတာ ကွေးကွေးလေးတဲ့။ ပြီးတော့ သူလည်း ကလေးတစ်ယောက်လိုနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်သွားမိရပါတယ်တဲ့လေ။ သူဖြစ်ခဲ့ပြု ခဲ့တာတွေ သတိမထားမိဟန်ဖြင့် ကျွန်တော်ကတော့ နားထောင်မိရပါတယ်။
အဲဒီတနေ့လုံးဟာ သူ့အတွက် အခန်းရှာရင်းကုန်ဆုံးသွားရပါတယ်။ သူ့ခံစားချက် ဒါမှမဟုတ် budget နဲ့ကိုက်မည့် အခန်းဆိုပါတော့။ ကျွန်တော်တို့ ညစာအတူစားခဲ့ကြရင်း ကျွန်တော်ငှားထားတဲ့တိုက်ခန်းမှာ ကုန်ကျစရိတ်ဝေမျှ ကုန်ရင်းနေထိုင်လို့ရကြောင်း အကြံပြုတော့ သူစဉ်းစားလေရဲ့။ ကျွန်တော်က ဘာမှလုပ်စရာမရှိရင် တီဗီပဲဖွင့်နေတတ်တော့ Rock သီချင်းတွေဟစ်နေတတ်တော့ သူ့အတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်မလားဘဲလေ။ သူကအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်သူ မဟုတ်လား။
ညနေပိုင်းရောက်တော့ ဇေယျာကျွန်တော့်ကို စားနေကျဖေးဘရိတ်အစားအစာဖြစ်တဲ့ ဆူရှီနှင့် သူစားနေကြ ပန်းဂျုံခေါက်ဆွဲကိုတစ်ဝစား ဖို့ ခေါ်သွားပါတယ်။ မြို့လေးရဲ့အနောက်ဘက်ပိုင်းက 'Zephyr' ဆိုင်လေးကို။ ကောင်မလေးအချို့က သူ့ကိုငမ်းကြပေမဲ့ သူကတော့မသိ သလို ဖာသိဖာသာပါပဲ။ စားသောက်ပြီးကြတော့ ကျွန်တော့်တိုက်ခန်းဆီပြန်လာကြတယ်။ တနေကုန်တိုက်ခန်းပတ်ရှာရတာကြောင့် ပင် ပန်းပြီးအိပ်ချင်ပြီဆိုကာ အိပ်ခန်းဆီသွားပါတော့တယ်။ သူကတီရှပ်တစ်ထည်နှင့် ဘောင်းဘီတိုနှင့်လှဲလျောင်းချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်က အ၀တ်မပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ယာဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက အဲဒီလိုအမြဲအိပ်နေရင် ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းဘူးဆိုပဲ။ ဒီလို အိပ်တာ ပုံမှန်ဖြစ်နြေ့ပီလို့။ ဒါဆိုလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်သာအိပ်တော့ သဘောရှိတဲ့။
အိပ်ယာထဲအသာဝင်လှဲလျောင်းပြီး အပေါ်စောင်လွှမ်းလိုက်ချိန်မှာတော့ ဇေယျာကပြောတယ်....'ဇော့်ဘော်ဒီက အတော်မိုက်တာပဲ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သလား?'
'မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးကွာ၊ ဒါပေမဲ့ ငါ့အလုပ်မှာက အလေးအပင်တွေကို အမြဲမနေရတာဆိုတော့ အော်တိုကိုပဲ ကစားပြီးသားဖြစ်နေတယ် နဲ့တူတယ်။'
'ဟုတ်မယ်....Gym မှာသာသွားကစားရင် တကယ့်ရှယ်ဖြစ်သွားမှာဗျ..'
တတောက်တော်နှင့် အသံလေးမြည်နေသံကြောင့် မနိုးတစ်ဝက်နိုးတစ်ဝက်ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော်ထထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ စာကြည့်စားပွဲကို သူ ရှင်းနေတာလေ။ ငယ်ငယ်ကတည်းကသူ့အကျင့်... ကျွန်တော့်စာအုပ်စင်ဆို သူအမြဲမွှေတတ်တယ်။ ပြီးရင် စာအုပ်တွေကို နာမည်အ လိုက် စာရေးဆရာအလိုက်သူပြန်ပြီးစီထားလေ့ရှိတယ်။အခုလည်း စားပွဲပေါ်ကစာအုပ်တွေကိုသူမွှေနေတာ။
'ဟုတ်တယ်ဇော်...ညီမအိပ်ချင်သေးလို့ စာအုပ်မွှေနေတာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားရင် ဆောရီးနော်'
'ရပါတယ်....မင်းစိတ်ဝင်စားမယ့်စာအုပ်တွေက ဟိုဖက်မှကွ စာအုပ်စင်ညာဘက်အခြမ်းမှာလေ'
သူစိတ်ဝင်စားတတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားဆောင်းပါးပေါင်းချုပ်စာအုပ်တွေပေါ့။သူက ဖတ်ပြီးဟိုနေရာဒီနေရာကဘာဆိုတာစပ်စုရတာ ကြိုက်တယ်လေ။ ကျွန်တော်ကတော့ စာဖတ်ရင်း နေရာသစ်ဆီရောက်သွားရတာကိုသဘောကျလို့ ၀ယ်စုထားဖြစ်တာပါ။
'အောင်မယ်...ကလေးပုံပြင်တွေဖတ်လည်း ဗဟုသုတရတာပဲကွ ယူတတ်ရင်'
သူစာအုပ်လေးငါးအုပ်ကိုကောက်ကိုင်ရင်းနောက်တော့ ခုတင်ဘေးက ခြင်းတောင်းထဲထည့်ထားတဲ့ Playboy မဂ္ဂဇင်းအသစ်ကို ကောက် ကိုင်လိုက်တယ်။ ဒီလအတော်မိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေရဲ့ပုံတွေပါတယ်။ ကျွန်တော်တောင်အပြီးမဖတ်ရသေး မကြည့်ရသေးဘူး။
စကားကိုဟိုသည်ပြောဖြစ်ကြရင်း မနေ့ညကအဖြစ်အပျက်အကြောင်းပြောလိုက်တော့ သူကျွန်တော့်မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်လေရဲ့။ 'မနေ့ညက ညီ့အပြုအမူတွေက ဇော့်အတွက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားလို့လား?'
'အနှောင့်အယှက်တော့မဖြစ်ပါဘူး ငါလည်းစူးစမ်းချင်တာနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်သေးတယ်' လို့ပြောလိုက်ရော။ 'ဘာကိုစူးစမ်းတာလည်းဗျ၊ ကျွန်တော့် cum ရဲ့အရသာကို.....ဟုတ်လား? ဘယ်လိုနေလဲ?' သူဖတ်နေတဲ့ မဂ္ဂဇင်းကို ပေါင်ပေါ်ချကာ ကျွန်တော့် မျက်ဝန်းကို အဖြေ ရှာလေရဲ့။
'နည်းနည်းအနံ့စူးတယ်ကွ၊ ဒါပေမဲ့ သိပ်တော့မဆိုးပါဘူး'
'စံပယ်လည်း ညီ့ဟာတွေကို စူးစမ်းကြည့်ပုံရတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲက နည်းနည်းကြီးတော့ အဲဒါကို ပိုအာရုံစိုက်တယ်နဲ့တူပါတယ်'
သူနဲ့သူ့ဇနီးအကြောင်းတွေကို စကားစပ်မိတော့ပြောပြနေတာများ ခရေစေ့တွင်းကျ။ သူတို့ဆက်ဆံပုံအနေအထား၊ စံပယ်ဆိုတဲ့ သူ့ မိန်းမအကြိုက်ပုံစံတွေကောပါသေး။ တစ်ခါတလေ သူလည်း ကျွန်တော့်လို အရသာခံကြည့်ချင်ပေမဲ့ အာရုံမရောက်မိပါဘူးတဲ့။ သူ့မိန်းမ ဗိုက်ပေါ် ပန်းထုတ်ဖူးတာလည်းပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ သူ့မိန်းမဆုံးပြီးကတည်းက တခြားသူနှင့် လိင်ဆက်ဆံရမှာကို ကြောက်နေသလိုပဲတဲ့။ ယုံကြည်စိတ်ချ ရင်းနှီးမှု မခံစားရလို့ ထင်ပါရဲ့တဲ့လေ။
စကားပြောဆိုရင်း ကျွန်တော့်မျက်နှာဆီ စိုက်ကြည့်ကာ အတန်ကြာငေးနေသေးတယ်။ ပြီးမှ ကျွန်တော့်ဗိုက်က ဘယ်ရီတုံးလေးတွေကို ကြည့်ရင်း 'ဇော်...ညီတို့ အရသာသစ်တစ်ခုကိုစမ်းသပ်ကြည့်ကြမလား အတူတူ' ကျွန်တော်ကရောဘာကြောင့်ငြင်းဆန်ရမှာလည်း 'Sure' ပေါ့။
လက်ထဲမှာ ဖတ်နေတဲ့ မဂ္ဂဇင်းကို ခုတင်ဘေးက စားပွဲပုလေးပေါ်လှမ်းတင်လိုက်ကာ သူ့ boxer ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပါတော့ တယ်။ စကားတွေပြောရင်း စိတ်လာနေပုံရပါရဲ့ သူ့ငပဲက မိုးပေါ်ထောင်လို့။ ငယ်ငယ်တုန်းက မြင်ဖူးပေမဲ့ အရွယ်ရောက်လာမှ သေချာ ရှင်းရှင်းမြင်ဖူးရတာ... ကျွန်တော့်ဟာနှင့် မတိမ်းမယိမ်းပါပဲ။ နည်းနည်းပိုရှည်တယ်။ သူ့လက်တွေနှင့် သူ့ဟာသူကိုင်လိုက်ရင်း ကစား တာ အထက်အောက်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဘေးမှာ အသာလှဲရင်း ငြိမ်ကြည့်နေမိတာပေါ့လေ။
'ဘာလုပ်နေတာလည်း? ညီနှင့်အတူ Join လေဗျာ'
နည်းနည်းတော့ စိတ်လှုပ်ရှားရတာပေါ့လေ။ ကိုယ့်ညီအစ်ကိုလိုဆက်ဆံလာသူတစ်ယောက်ရှေ့မှာ လုပ်ရမှာဆိုတော့။ အို....ဘာပဲဖြစ် ဖြစ်....ရင်ဘတ်ပေါ်လွှမ်းထားတဲ့ စောင်ပါးကို လှပ်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ညီဘွားကို လေညှင်းခံလိုက်ပါတယ်။
'Wow! ဇော့်ဟာက အမိုက်စားပဲဗျ'
ဟုတ်တယ် ကျွန်တော့်ဟာက ပိုတုတ်ပေမဲ့ သူ့ဟာက ပိုပြီးရှည်လျားတယ် ကြီးထွားတယ်လေ။ နှစ်ဦးသား ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်လက်ကစား နေကြရင်းမှ သူ့ငပဲကို အသာကြည့်မိစဉ်မှာတော့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲက သွားရည်တွေကျလာသလားပဲ။ ကျွန်တော့် အာခံတွင်းထဲထည့် ပြီး ပြုစုလိုက်ရရင် ဘယ်လိုဖီလင်များ ခံစားရမှာပါလိမ့်လို့လည်းတွေးမိရပါတယ်။ စိတ်ကထိန်းနေပေမယ့် ကျွန်တော့်လက်တွေဟာ သူ့ ငပဲဆီရောက်ရှိထိတွေ့နေပါပြီ။ သူ့တုံ့ပြန်ချက်ကလည်း မိုက်ပါတယ်။ ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ သူ့လက်ကို ငပဲကနေလွှတ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော့် ကို အားရပါးရကိုင်တွယ်စေရဲ့။
ကျွန်တော် သူ့ငပဲကို အသာကိုင်လိုက်ရင်း တဖြည်းဖြည်းပွတ်သပ်ပေးကာ မျက်ဝန်းတွေဆီကြည့်မိရတော့ သူ့ခမျာမှေးမှိတ်သွားပြီး ခေါင်းအုံးပေါ်ကို လှဲလျောင်းလိုက်တော့တယ်။ လက်နှစ်ဖက်နှင့်စုံကိုင် အသာအထက်အောက်ရွှေ့ပေးတော့ သူ့တင်ပါးစုံဟာ လှုပ်ရှား လာပြီး အသွင်းအထုတ်လုပ်တော့တာ။ တိုးဝင်လိုက် ထွက်သွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ငပဲရဲ့ထိပ်မှာ အရည်ကြည်လေးတွေစို့လာတော့ ကျွန်တော့်အဲ့ဒီအရသာကို ပြန်လည်ခံစားမိချင်ပါရော။ နည်းနည်းညောင်းလာတော့ အိပ်ယာပေါ်အသာမှောက်လိုက်တာမှာ သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော့်မျက်နှာဆီ အတည့်ချိန်ရွယ်ထားတာကလား။ လျှာလေးကိုအသာထုတ် ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ဝက အရည်ကြည်လေးကို တို့ကြည့် တော့ ငံကျိကျိနဲ့ sweet butter အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်တော့်လျှာကလေးရဲ့ ကလိမှုမှာ သူပါလာပြီးနောက် နှုတ်ခမ်းလွှာ တွေကြားထဲထိုး သွင်းဖို့ကြိုးစားပါလေ့ သူက။ သူ့ငပဲကို အသာသွင်းလာတော့ ကျွန်တော်ကွမ်းသီးခေါင်းကို ရှလွတ်ကနဲစုပ်ယူလိုက်တာ ဇေယျာလေ 'Oh yeah!' တဲ့။ ကျွန်တော်သူ့ကွမ်းသီးခေါင်းကိုနဲ့ အပေါက်လေးမှာ လျှာကစားရင်း ပါးစပ်ထဲ အသွင်းအထုတ်ပြုရင်းတွေးမိရတာက 'ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ -ီးကို ငါစုပ်နေပါလားလို့' ဒီဖီလင်ရဲ့ အဆုံးစွန်ဟာ ဘယ်လိုနေလည်းသိချင်တယ်၊ ကျေနပ်အရသာခံစား ကြည့်ချင်တယ်။
သူ့တင်ပါးကို တစ်ချက်ပင့်ကာ ပါးစပ်ထဲထိုးသွင်းတိုင်း ကျွန်တော်နည်းနည်းစီ ပါးစပ်ဟဟပေးဖြစ်တာမှာ နောက်ဆုံးသူ့ငပဲတစ်ချောင်း လုံး လည်ချောင်းထဲထိရောက်သွားပါပြီ။ လည်ချောင်းထဲဆို့သလိုဖြစ်သွားတော့ သူနည်းနည်းဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း 'Sorry' တဲ့ပြောဖော် ရပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ငပဲကိုဆက်ပြီးစုပ်ယူတယ်၊ လျှာကစားတာမှာ သူအကြိုက်ဖြစ်သွားကာ 'ဇော်.....ဒီဖီးလ်က အတော်ကောင်း တာပဲဗျာ'..... သူက ငယ်ငယ်ကတည်းက အစ်ကိုမခေါ်ဘဲ 'ဇော်'လို့သာ ခေါ်တတ်ခဲ့တာလေ။ သူ့ခါးတွေ၊ တင်တွေလှုပ်ရှားမှု ပါးစပ်ထဲ အသွင်းအထုတ်မြန်လာမှုတို့ကို စတင်ခံစားလာရတော့ သူ့ climax ရောက်တော့မယ်ဆိုတာ သိလာရပါပြီ။ ပါးစပ်ကလည်း ညည်းတွားမှု အသံတွေထွက်လာကာ သူ့ငပဲကို အသာဆွဲထုတ်ပစ်ပါရော။
'အရမ်းကောင်းတာပဲဗျာ၊ စံပယ်ဘယ်တော့မှ ညီ့ကိုမလုပ်ပေးဖူးဘူး'
နူးညံ့ရီဝေတဲ့ မျက်ဝန်းအစုံက ကျွန်တော့်ကို ကြင်နာစွာစိုက်ကြည့်ရင်း အောက်ပိုင်းစီကိုရွေ့သွားကာ ကျွန်တော့်ငပဲကို မြင်သွားတော့ 'ဇော်....မင်းဟာကို စုပ်ကြည့်ရမလား?' ကျွန်တော် ဘာမှပြန်မပြောဘဲ အိပ်ယာပေါ် နောက်ပြန်လှန် အသာလှဲလိုက်ရင်း ပေါင်တွေကား ပေးလိုက်တော့ အပြည့်အ၀ကိုမာထောင်ပြီး သူ့အတွက်မိုးပေါ်ထောင်နေပါတယ်။ ဇေယျာ ကျွန်တော့်ပေါင်ခြံဆီ မျက်နှာမူလိုက်ရင်း ငပဲကို အသာကိုင်ကာ အတံတစ်လျှောက် တရွေ့ရွေ့လျှက်ပါတော့တယ်။ ထိပ်ဝကိုလည်း ကလိသေးရဲ့ ။ ပါးစပ်ကို ဟကာ တဖြည်းဖြည်းမျိုချ လိုက်တာ သူ့လည်မျိုထဲရောက်သွားပြန်တော့ သူအသာငြိမ်နေကာ ခဏကြာချိန်မှာတော့ သူ့ဦးခေါင်းကို လှုပ်ရှားပါတော့တယ်။
'Wow! ဒီဖီလင်၊ ဒီစိတ်ကျေနပ်မှုမျိုးမရတာ ကြလှပါရော'
သူ့လျှာဖျားဟာ ကျွန်တော့်ငပဲရဲ့ ကွမ်းသီးခေါင်းထိပ်ဝဆီလျှာစက်ဝန်းလှည့်နေတာကို ခံစားနေရတာ။ ပြီးတော့ ထိပ်ပိုင်းကို အသာငုံပြီး စုပ်နေတာဟာလေ....တစ်ခြားကမ္ဘာသစ်ဆီ ကျွန်တော်ရောက်သွားရပါတယ်။
ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေထဲမှာ တုန့်ပြန်မှုတွေ၊ တုန်ခါမှုတွေဟာ တဆတ်ဆတ်ခါ။ ကျွန်တော်ပြီးဆုံးတော့မယ် ပန်းတိုင်ရောက်တော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပြီ။ ဒါကြောင့် ဇေယျာ့ပါးစပ်ထဲက ဆွဲထုတ်ပြီး သကာလ 'Whoa..ငါပြီးတော့မယ်ကွ' ပြောလိုက်တော့ သူကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲ ကအတိုင်း လုပ်ကြရအောင်တဲ့။ 'ညီကြည့်ဖူးတဲ့ 'Deep Throat' ဆိုတဲ့ကားထဲမှာ Linda Lovelace ဆိုတဲ့မင်းသမီးကလေ ဘဲကြီးတစ်ပွေ့ ဟာကို စုပ်မျိုတာ သူ့နှာခေါင်းနဲ့ balls တွေထိတဲ့အထိပဲ။ သူတို့နေတဲ့အနေအထားက ညီတို့နဲ့သင့်တော်မယ့်ပုံ 69ပုံစံဗျ။ ဘာကြောင့်ဆို တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အဲဒီ့ဘဲက အသားဖုလေးကို လျှာနဲ့ကလိပြီးစုပ်နေတာ'
ကျွန်တော်ဘာစကားမှ တုန့်ပြန်မပြောတော့ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်လိုက်ကာ ဦးခေါင်းကို အိပ်ယာခြေရင်းသို့ မူလိုက်ပါတယ်။ ဇေယျာက လည်း ကိုယ်ခန္ဓာကို အသာလျောလိုက်ကာ အလိုက်သင့်နေပါတော့တယ်။ တစ်ယောက်ဟာ တစ်ယောက်မျက်နှာမူပြီး သားဖြစ်ရောပေါ့ တစ်ခါ။ သူ့ငပဲက ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းဖျားဆီ ချိန်ရွယ်ထားပြီး ကျွန်တော့်ဟာကလည်း သူ့အာခံတွင်းဆီ ၀င်ရောက်ဖို့အသင့်။ ကျွန်တော့် ပါးစပ်ကို အသာဟ သူ့ငပဲကို စတင်စုပ်ယူစဉ်မှာတော့ သူလည်း အလားတူ ပါးစပ်ကိုဖွင့်ကာ ကျွန်တော့်ညီဘွားကို မျိုချလိုက်တာ သူ့ လည်မျိုထဲရောက်ကရော။ သူ့နှာခေါင်းနှင့် ကျွန်တော့် balls တွေထိကပ်သွားကာ လေငွေ့နွေးနွေးသူ့နှာဝက ထွက်မှုကိုသိရှိရပေါ့။ သူ 'deep throat' လုပ်နေခြင်းပဲလေ။ ဒီဖီလင်က ကျွန်တော့်ညီဘွားကို အပျိုစင့် ပစ္စည်းထဲ ကြပ်ကြပ်သိပ်သိပ် သွင်းနေရသလိုပါ။
ကျွန်တော်သည်လည်း သူလုပ်သလို ပါးစပ်ကို ကျယ်ကျယ်ဖွင့် ကွမ်းသီးခေါင်းကနေ အောက်ခြေထိ တဖြည်းဖြည်းသွင်းလိုက်တာ တစ် ၀က်လောက်အရောက်မှာတော့ ဆက်မသွင်းနိုင်ဘဲ ရပ်ပစ်လိုက်တယ်။ ဇေယျာက ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုအသာကိုင် သူ့တင်ပါးကို မြှောက် ကာ သွင်းလိုက်တော့ လည်ချောင်းထဲထိသူ့ငပဲရှည်ရှည်က ၀င်သွားပါရော။ လည်ချောင်းထဲ တစ်သလိုဖြစ်ပြီး အသက်ရှူရခက်သွားတာ ကြောင့် ကျွန်တော် သူ့ဟာကို ဆွဲထုတ်လိုက်ကာ အသက်ကို၀၀ရှူလိုက်ရပါတယ်။
သူကတော့ တစ်မျိုးကျွန်တော့်ဟာကို အဆုံးထိသွင်းလိုက်ပြန်ထုတ်လိုက်လုပ်နေတာကြောင့် ကျွန်တော့်မှာ ဖီးလ်ဂွတ်ပြီးရင်းဂွတ်။ ကျွန်တော်လည်း ပြန်လည်ပြုစုရတာပေါ့ တတ်သလောက်။ ကျွန်တော့်အာခံတွင်းထဲ လျှာနဲ့မွှေနေစဉ်ခဏမှာ သူဆွဲထုတ်လိုက်ကာ 'ဇော်. ..ညီပြီးတော့မယ်ဗျ'တဲ့။ ကျွန်တော်လည်း ပြီးတော့မှာ ထိန်းနေလို့သာ။ သူ့နှုတ်ဖျားက ဖီးလ်တက်သံအဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်လာစဉ်မှာ တော့ ကျွန်တော့်ပြုစုမှုကိုအသာရပ် အိပ်ယာပေါ်အသာပြန်လှဲရင်း အမောဖြေရတာပေါ့။ သူကဒီအရသာကို ဆက်လိုချင်သေးဆိုတာ ကိုး..။
'ဘယ်တုန်းကမှ ဒီဖီလင်မျိုးမရဖူးဘူးဗျာ...။ ဇော်...ဟာတွေ ညီ့ပါးစပ်ထဲပန်းထည့်စေချင်တယ်...အိုကေတယ်မဟုတ်လား?'
ငြင်းဆန်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူးလို့။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်လည်း သူ့လိုပဲလုပ်ကြည့်ချင်နေတာပါလေ။
အရှိန်ရနေဆဲမှာပဲ အိပ်ယာပေါ်က အသာထ ရေချိုးခန်းထဲသွား ဆေးပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့ ဘီရိုအသေးလေးထဲက Lube ဘူး အချို့ ကိုယူက အိပ်ယာပေါ်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ချစ်လှစွာသော ညီကလေးရှိရာဆီပေါ့။ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေမှာ Lube နည်းနည်းစွတ် ကာ အနေအထားပြန်ယူလိုက်ပါတယ်။ မပျော့သေးတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့အာခံတွင်းထဲ အဆုံးထိဖိထည့်လိုက်သလို သူ့ငပဲကိုလည်း အလားတူလုပ်ပေးမိပေါ့။ တစ်ခုပိုတာကတော့ ချောဆီစွတ်ထားတဲ့ လက်ချောင်းထဲက တစ်ခုကို သူ့ချယ်ရီပေါက်ထဲ အသာထိုးထည့် တော့ အစပထမ သူအော်သေးတယ် ခဏနေတော့ ပြေလျော့သွားပါရဲ့။ အသာလေးအသွင်းအထုတ်လုပ်နေရင်း ဒုတိယလက်ချောင်းကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းသွင်းလိုက်တယ်။ အိုကေပြီဆိုတော့မှ သူ့ကို ကလိတာ သူ့ငပဲက ငေါက်ကနဲ ငေါက်ကနဲ ခေါင်းငြိမ့်သည်သာမက နှုတ်ဖျား ကလည်း Ummmmm တဲ့။ ခဏကြာချိန်မှာတော့ ဆတ်ကနဲတုန်ခါသွားတဲ့ သူ့ငပဲက ချွဲပစ်ပစ်အရည်တွေ ကျွန်တော့်လည်ချောင်းထဲ ရောက်ကုန်ရော။ အသာဆွဲထုတ်လိုက်ရင်း ထိပ်ပေါက်ဝကို လျှာနဲ့ထပ်ကလိတော့ ကျန်ရှိပစ္စည်းတွေ ပန်းကနဲ ထုတ်လိုက်တာ နှုတ်ခမ်းဖျားပေါ်ကျကုန်ပါတယ်။ 'အာ...အ...အ' အခုတော့ သူ့cum ရဲ့အရသာကို မြည်းစမ်းနိုင်ပြီ။ 'သောက်လေ ငတ်မပြေ' ဆိုတဲ့အရသာမျိုးပါပဲ။
ကျွန်တော်သိတယ် သူအာသီသပြည့်ဝသွားပြီဆိုတာ။ ဘာကြောင့်ဆို သူကျွန်တော့်ငပဲကို ကွမ်းသီးခေါင်းအထိဆွဲထုတ်လိုက် လည်မျိုထဲထိ ဖြည်း ဖြည်းသွင်းလိုက် လုပ်ပေးနေရာမှ ခပ်သွက်သွက် ကစားပေးရင်းလျှာသရမ်းတော့တာ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး တဖျင်းဖျင်းဖြစ်သွားရပြီး သူ့လည်မျိုထဲအဆုံးထိရောက်စဉ်ခဏ ရွှေဥထဲ မကျန်တော့လောက်အောင် ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်ပြီးသွားမှန်းသိတော့ ဆွဲမထုတ်သေးဘဲ ခဏငြိမ်နေပြီးမှ အနည်းငယ်ဆွဲထုတ်ကာ ကွမ်းသီးခေါင်းကို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပါတော့ တယ်။ ကျွန်တော့် cum တွေကိုမျို ချလိုက်ပြီး ထိပ်ပေါက်ဝလေးကို လျှာဖျားနဲ့ကလိနေသေးတော့တာ။
ခဏတာတော့ ကုတင်ပေါ်ဝယ် နှစ်ဦးသား ပက်လက်လှန်ရင်း အမောဖြေအနားယူဖြစ်ကြတာပေါ့လေ။ ဇေယျာက 'ဇော်....ညီတို့ ဒီလိုလုပ် ဖြစ်တာ အတော်ဆိုးတဲ့ဖြစ်ရပ်လို့ ထင်လားဗျာ?'
'ငါတို့ စမ်းသပ်ချက်၊ ဟုတ်တယ် ကလေးသူငယ်တွေ အရွယ်ရောက်ချိန်မှာ သိချင်စိတ်တစ်ခုကို စမ်းသပ်တဲ့ ပုံစံမျိုးပါပဲ။ ဟိုးငယ်ငယ် တုန်းက ငါတို့လုပ်ဖူးခဲ့သလိုမျိုး ပြန်ဖြစ်ခြင်းသက်သက်လေးပါ'
သူုငြိမ်သက်စွာ သဘောတူညီရင်း နှစ်ဦးသားကိုယ်ပေါ်စောင်ပါးလေးတစ်ထည်လွှမ်းစေတယ်။
နောက်တော့....သူ့လက်မောင်းတွေဟာ ကျွန်တော့်ကို ရစ်ပတ်နှောင်တွယ်လာကာ နှုတ်ခမ်းတွေအား အနမ်းချွေပြီးနောက် ....'I love you, brother.'..။
'I love you...too'
ခပ်မှိန်မှိန်လေးလင်းနေတဲ့ ညမီးအိမ်လေး....အလင်းတွေလျော့နည်းလာကာ တဖြည်းဖြည်းမှိတ်....အမှောင်တွေထဲ နှစ်ဦးသား တိတ် ဆိတ်......တိတ်တဆိတ်။
Wrote by Alex Aung (13.3.2010)
ပေါင်ကြားက ညီဘွား သန်မာတောင့်တင်းစေဖို့ စားသုံးသင့်သောအစားအစာ (၁၀) မျိုး
လိင်မှုဘ၀သာယာဖို့ သို့မဟုတ် လိင်ဆက်ဆံရာမှာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားရရှိပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကျနော်တို့အမျိုးသားတိုင်း တောင့်တ ကြ အလိုရှိကြပါတယ်။ ဒါကို ၀န်ခံရတာဟာ ရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ အမျိုးသားအများစုမှာ လိင်ဆက်ဆံရာ၌ လိင်အင်္ဂါတောင့်တင်းမှုမရှိ ပျော့ပျောင်းသွားခြင်းဆိုတဲ့ ကိစ္စသည် တကယ့်စိုးရိမ်စိတ်အစစ်အမှန်တစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။
သို့သော်လည်းပဲ ဒီလိုစိုးရိမ်စိတ်ကဲနေသူများရဲ့ စိတ်ကိုအဆုံးသတ်ပေးဖို့ သတင်းကောင်းအချို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုရပါမယ်။
ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်နဲ့ အရှေ့အန်ဂျလီယာ တက္ကသိုလ်က သိပ္ပံပညာရှင်များရဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသန တစ်ခုအရ ၀ိုင်နီတစ်ခွက် ပုံမှန်သောက်သုံးသူ၊ အချဉ်ဓာတ်ပါ အသီးအနှံများ စားသုံးလေ့ရှိသူ၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ဘလူးဘယ်ရီတို့လို ဘယ်ရီသီးများ၊ ပန်းသီးနဲ့ သစ်တော်သီးကဲ့သို့သော အသီးများ ပုံမှန်စားသုံးလေ့ရှိသူအမျိုးသားများဟာ ပန်းသေပန်းညှိုး ဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း နည်းပါးလေ့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
သုတေသနပြုလုပ်သူများ ရှာဖွေတွေ့ရှိတာကတော့ သုံးမျိုး သို့မဟုတ် လေးမျိုး သို့မဟုတ် flavonoid ဓာတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာနဲ့ သောက်စရာ တစ်ဖန်ခွက်စားသောက်ခြင်းသည် လိင်အင်္ဂါတောင့်တင်းမှုလျော့ခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာဖြစ်နိုင်ခြေအား 21%အထက် လျော့နည်းစေနိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်နဲ့ နှီးနွယ်နေကြောင်းတွေ့ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
“သက်လတ်ပိုင်းအမျိုးသားများနှင့် သက်ကြီးအမျိုးသားများရဲ့ တစ်ဝက်လောက်မှာ flavonoids နဲ့ ပန်းသေပန်းညှိုးအကြား နှီးနွယ် ပတ်သက်မှုရှိနေကြောင်းပြသဖို့ ပထမဆုံးစမ်းသပ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်” လို့ သုတေသနပြုလုပ်ရာမှာ ဦးဆောင်သူ Professor Aedin Cassidy ကဆိုပါတယ်။ “flavonoids ဓာတ်ပါဝင်နှုန်းမြင့်များတဲ့ အစားအသောက်များကို ပုံမှန်နီးပါး စားသောက်သော အမျိုးသားများဟာ ပန်းသေပန်းညှိုးလက္ခဏာ ချဉ်းကပ်ဖို့နှုန်းနည်းပါးပါတယ်။ ပမာဏအနေနဲ့ပြောရရင် ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ရက်သတ္တပါတ်တစ်ပါတ်ကို မကြာခဏဆိုသလို အနည်းအကျဉ်းတော့ စားသုံးမှီဝဲဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။”
အခု….ကောင်းပါပြီ…. ၀ိုင်နီတစ်ဖန်ခွက်အမြဲသောက်ဖို့ မကြိုက်တဲ့သူရှိတာ ကျနော်သိပါတယ်၊ ပြီးတော့ အချို့သော အသီးအနှံများကို လုံလုံလောက်လောက် မစားသုံးကြတာလည်းရှိနိုင်တယ် နမူနာပြပြောခဲ့တဲ့ အစားအသောက်များအပါအ၀င်ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ချစ်တင်းနှီးနှောတဲ့အခါ သင့်ဖွားဖက်တော်ကို ပွတ်သပ်နှိုးဆွလိုက်ချိန်တိုင်း တောင့်တင်းသန်မာအားပြည့်နေစေမယ့် အစားအသောက် (၁၀) မျိုးရှိနေသေးတာကို သိဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျ။
၁။ ကော်ဖီ (Coffee)
Java ကော်ဖီလို မွှေးပျံ့ကောင်းမွန်တဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ဟာ စာဖတ်သူရဲ့ကိုယ်တွင်းဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို မြှင့်တင်မြန်ဆန်စေရုံသာမက သွေးကြောအတွင်း အဆီများကြောင့် စီးဆင်းမှုနှေးတဲ့ သွေးဆီးဆင်းမှုတုန့်ဆိုင်းခြင်းအား လျော့နည်းစေပြီး တစ်ညတာလုံး လိုချင်တဲ့ လန်းဆန်းတဲ့ အားအင်မျိုး ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၂။ ကနုကမာ (Oysters)
စွဲဆောင်မှုပြင်းတဲ့ ဂုဏ်သတင်းပိုင်ဆိုင်နေခြင်းရဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခု သူတို့မှာရှိပါတယ်။ Oyster မှာ ဇင့် (Zinc) သတ္ထုဓာတ်နဲ့ ဗီတာမင် B6 တို့လို တက်စထရိုစထရုန်း(testosterone)ဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် ဖွားဖက်တော် ဖောင်းကြွထွားကြိုင်းလာစေဖို့နဲ့ ကောင်းမွန်တက်ကြွတဲ့ ချစ်တင်းနှီးနှောမှုရရှိဖို့အကျိုးများစေပါတယ်။
ဒီ Oyster စားရာမှာ လည်မျိုထဲနင်သလိုလိုဖြစ်ရတယ် စားရတာ မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ အခွံမာသီးနဲ့ အချို့သောအစေ့အဆံတွေထဲ ကလည်း တက်စထရိုစထရုန်း (testosterone) ဓာတ် ရနိုင်ပါတယ်။
၃။ ငရုပ်သီး (Chilies)
စာဖတ်သူရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ လိင်မှုဘ၀ကို ငရုပ်သီးနဲ့ ထုံမွှန်းကြည့်ပါ။ ငရုပ်သီးအစပ်ကဲတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ကိုစားသောက်ပြီးပြီးခြင်း မျက်နှာကြီးနီရဲလာတာဟာ သွေးပျစ်မှုကိုလျော့နည်းစေလိုက်ပြီး သွေးတွေကို သွေးကြောအနှံ့ပြန့်ကားသွားအောင်ဖြန့်လိုက်တဲ့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ သိသာတဲ့ မျက်နှာပိုင်းဘက်ကိုသာ သွေးများဖြန့်ကျက်ပျံ့နှံ့သွားတာမဟုတ်ပါဘူး သေးငယ်တဲ့ လိင်အင်္ဂါသွေးကြောမျှင်များ ရှိရာကိုလည်း သွေးကိုကောင်းစွာစီးဆင်းအောင်ဖြန့်ကျက်စေတဲ့အတွက် ဖွားဖက်တော်ကြီး ကောင်းစွာမာကျောလာရာမှာ အထောက်အပံ့ ကောင်းစေပါတယ်။
သန်မာတောင့်တင်းတဲ့ ညီဘွားဖြစ်ဖို့ရာမှာလည်း သန်မာတဲ့ နှလုံးတစ်စုံ၊ ကျန်းမာချောမွေ့တဲ့ သွေးပြွန်(သွေးကြော)များ ဖြစ်နေစေဖို့ အတွက် ငရုပ်သီးက အထောက်အကူပေးပါတယ် ခင်ဗျ။
၄။ ငှက်ပျောသီး (Bananas)
မာကြောတောင့်တင်းတဲ့ ဖွားဖက်တော်ပိုင်ရှင် အမျိုးသားများဟာ နှလုံးအားကောင်းကျန်းမာကြပါတယ်။ နှလုံးအားကောင်းပြီး သွေးလေ လှည့်ပတ်မှုမှန်ကန်စေဖို့အတွက် ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ငှက်ပျောသီးကိုစားသုံးရပါမယ်။လုံလောက်မျှတတဲ့ ပိုတက်စီယမ်ဓာတ် ရရှိရင် သွေးတွင်း ဆိုဒီယမ်ဓာတ်ကို ထိန်းညှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် သွေးပေါင်ချိန်မြင့်တက်လာမှုကို လျော့နည်းစေနိုင်သောကြောင့် နှလုံး ရောဂါပြဿနာများကို လျော့ချပေးကာ ကျန်းမာစေပါတယ်။ တကယ်လို့ ဆားဓာတ်အစားများပြီး ငှက်ပျောသီးမကြိုက်နှစ်သက်ဘူးဆိုရင် တော့ လိမ္မော်သီးနဲ့ အာလူးသီး (အားလူးခွံ) များမှ ပိုတက်စီယမ်ဓာတ်ရရှိနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
၅။ ဆယ်လ်မွန်ငါး (Salmon)
အချို့သောငါးတွေမှာပါတဲ့ Omega –3Fatty Acids တွေဟာ သွေးတွေကို ပျစ်ပြီးစေးကပ်မှုမဖြစ်စေဘဲ ကိုယ်အင်္ဂါအနှံ့ အစိတ်အပိုင်းစုံ ကို သွေးလှည့်ပတ်မှု မြန်ဆန်ချောမွေ့စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ ငါးကွမ်းရှပ်များ၊ ထရောက်ငါးနှင့် တူနာငါးတွေကို ရက်သတ္တ ပါတ် တစ်ပါတ်လျှင် နှစ်ခါလောက်စားသုံးပေးရုံဖြင့် စာဖတ်သူရဲ့သွေးကြောများ ကောင်းမွန်ကျန်းမာစွာ အလုပ်လုပ်စေမှာပါ။
၆။ ၀က်သား (Pork)
လူအများစုထင်မြင်ယူဆထားသလို ဖွားဖက်တော်ကြီးဟာ သူ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့သူ လှုပ်ရှားနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖွားဖက်တော်ကြီး ကောင်းမွန် မှန်ကန်စွာ မတ်မတ်ထောင်နိုင်စေဖို့အတွက် စာဖတ်သူရဲ့ အာရုံကြောများဟာ စစ်တပ်တစ်တပ်လို တညီတညွတ်တည်း ပူးပေါင်းလှုပ်ရှား နေသလိုမျိုး တိကျသေချာကျန်းမာနေရပါမယ်။ ဒီလိုအာရုံကြောစနစ် ကျန်းမာနေစေဖို့အတွက် ဗီတာမင် B1 ဓာတ်လိုအပ်တာကြောင့် ၀က်သားစားခြင်းဟာ စာဖတ်သူရဲ့ ဖွားဖက်တော်ကြီး လမ်းကြောင်းမှန်စွာ မတ်ထောင်စေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ၀က်သားမစားသုံးသူများ အနေဖြင့် ပဲမျိုးစုံနှင့် ပေါင်မုန့်တွေကနေ ဗီတာမင်ဘီဓာတ်ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၇။ ချယ်ရီသီး (Cherries)
ချယ်ရီသီးတို့လိုအရောင်ကဲ အသီးအနှံများဟာ anthocyanins လိုဓာတုဒြပ်ပေါင်းများကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး သွေးလွှတ်ကြောနံရံတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်စွမ်းသလို သွေးလွှတ်ကြောတွေမှာ အဆီပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်အောင် တားဆီးရာမှာ အကူအညီဖြစ်ပါတယ်။ ချယ်ရီသီးမကြိုက် နှစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့ ဘယ်ရီသီးများ သို့မဟုတ် အရောင်အဆင်းတောက်ပသော မက်မွန်သီးလိုအသီးများ၊ ဆီးသီးများကို စားသုံးခြင်း ဖြင့် စာဖတ်သူရဲ့ ဖွားဖက်တော်ဆီ စီးဆင်းတဲ့သွေးကြောများကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။
၈။ ကြက်သွန်နီ (Onions)
ကြက်သွန်နီနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူတို့တွင်ပါဝင်သော phytochemical allicin ဓာတ်သည် သွေးတွင်းအဆီကိုလျော့နည်းစေပြီး သွေးလှည့်ပတ် မှုကောင်းစေကာ သွေးခဲတာ သွေးကြောပိတ်ဆို့မှုဖြစ်တာတွေကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကြက်သွန်များစားသုံးခြင်းကြောင့်ထွက်လာ တဲ့ အနံ့အသက်များအတွက်ကတော့ နံနံပင် (parsley) နဲ့ ပူစီနံရွက် (peppermints) များကိုစားသုံးခြင်းဖြင့် သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
၉။ ၀ိုင် (Wine)
၀ိုင် အထူးသဖြင့် ၀ိုင်နီတွေဟာ သွေးလွှတ်ကြောတွေကို ဖွင့်ဟပေးရာမှာ အကူအညီဖြစ်တဲ့ Nitric Oxide ဓာတ်ပိုမိုထုတ်လွှတ်ရာမှာ အထောက်အပံ့ဖြစ်သော Phytochemical resveratrol (Antioxidant) ရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Nitric oxide ဟာ သွေးကြောတွေထဲ သွေးများပြန့်ကားသွားစေဖို့ ခွင့်ပြုပါတယ် Viagra ဆေးအလုပ်လုပ်သလိုပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အပြာရောင် ဆေးလုံးလေးဟာ သွေးကြောအသေးလေးတွေမှာပဲ အလုပ်လုပ်နေစဉ် resveratrol ကတော့ အဓိကကျတဲ့ သွေးပြန်ကြော၊ သွေးလွှတ် ကြောတွေမှာပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေပါတယ်။ သတိထားရမှာကတော့ ၀ိုင်နီကိုသောက်သုံးရာမှာ တစ်ခွက် သို့မဟုတ် နှစ်ခွက် ထက်ပိုပြီး မသောက်မိစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟော အများအပြားမှီဝဲခြင်းဟာ မမတ်ထောင်နိုင်ဘဲ ထိတ်လန့်ဖွယ် ညွှတ်ကိုင်းခြင်း ဆီ ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်လို့ပါ ခင်ဗျ။
၁၀။ ဆန်ပြုပ် (သို့မဟုတ်) ဂျုံဖြင့်ပြုလုပ်သော ဆန်ပြုတ် (Porridge)
ဆန်ပြုပ်ဟာ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ oatmeal တို့လိုအရာတွေမှာပါဝင်တဲ့ ပျော်ဝင်နိုင်သော ဖိုင်ဘာမျှင်ဓာတ်တွေဟာ မကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောဓာတ်ကိုဖယ်ရှားရာမှာအဆင်ပြေစေပါတယ်။ သွေးကြောအနှံ့ ချောမွေ့ ကောင်းမွန်စွာ သွေးတွေစီးဆင်းနိုင်စေ အလုပ်လုပ်နိုင်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစာစားချင်စိတ်မရှိရင်တောင်မှ ကောင်းမွန်သော ဆန်ပြုပ် တစ်ခွက်ကို စားသုံးလိုက်ပါ။
Alex Aung (8 May 2016)
Ref: FOODS FOR HARDER ERECTIONS By Men's Health Posted on January 14, 2016